Kyi Aye (Literature): 2012
ကိုကို့နှမ မြနန္ဒာ (မောင် ကိုကို နှင့် မြနန္ဒာ ၃)
ကိုကို့ နှမကတော့ည ချစ်စရာလည်း ကောင်းပါရဲ့၊ သနားစရာလည်း ကောင်းရဲ့၊ စိတ်ပျက်စရာလည်း ကောင်းရဲ့ ဟု မြနန္ဒာရဲ့ အကိုလင် သာဦးဂျော်က တွေးလေ့ရှိ၏။ မြနန္ဒာဟာ နေ့ညမခွဲ အိပ်မက် မက်တတ်သူ၊ အိပ်မက်ကို တကယ်မှတ်သူ၊ အိပ်မက်ကိုစုံမက်သူ၊ ခေါင်းမာသူလို့ ထင်သည်။ သည်လိုပြောလျှင် မြနန္ဒာက နီမြန်းလာသောမျက်နှာကို ၀ှက်လိုဟန် ခေါင်းတဘက်ငဲ့၍ နွဲ့၍ “အို….သည်လိုမြနန္ဒာမွေးလာတာ။ ဘယ်သူ့အပြစ်လဲ” ဟု ဆိုပြန်ချေဦးမည်။
ပါပါ့ အပြစ်လား။ ပါပါကဖြင့် လူတို့ကြည်နူးစရာ အလှတရပ်အဖြစ် မွေးလာသော သမီး မြနန္ဒာကို ဘယ်လောက်မြတ်နိုးခဲ့သလဲ။ ဘယ်လောက် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်လောက် အဖိုးတန်ကလေး ဖြစ်စေခဲ့သလဲ။ ဘယ်လောက် အထက်တန်းကျစေခဲ့သလဲ။ မင်းမျိုးမင်းနွယ်တမျှပါဘဲကွယ်။
သမီးမြနန္ဒာကို မမွေးခင်ကတည်းက အစီအစဉ်ကြီးသူ ပါပါက အားလုံးစီစဉ်ခဲ့သည်ပင်။ ထိုအစီအစဉ်ထဲတွင် သာဦးဂျော်သည် နေရာကောင်းက ပါခဲ့သည်။ နှမတစ်ဝမ်းကွဲကမွေးတာ၊ တဦးတည်းသော သားဖြစ်တာ၊ မြနန္ဒာထက် ၆ နှစ်ခန့်ကြီးတာ၊ ရုပ်ရည်ချောမောသန့်စင်တာ၊ ပညာဥာဏ်တော်တာတွေသည် ပါပါ့ မျက်စိကျစရာ အရည်အချင်းများ ဖြစ်လေ၏။ သမီးမိန်းကလေးမွေးသည်ဆိုသည်နှင့် ပါပါသည် သာဦးဂျော်ကို သူ့အဖေ အမေဆီက တောင်းခဲ့သည်။
ပါပါ့ အစီအစဉ်အရ မြနန္ဒာမွေးသောနှစ်မှာပင် သာဦးဂျော် မေမြို့ကျောင်း ပြောင်းရသည်။ ငယ်ရွယ်သေးလျက်ဖြင့် ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်စုံ ၀တ်ရ၏။ အနောက်တိုင်းထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှုသာ သင်ကြားရ၏။ ရခိုင် မြန်မာစကား မပြောရတော့။ လန်ဒန်မက်ထရစ်ဖြေပြီး အင်္ဂလန်ပို့ရန် ရည်ရွယ်သေး၏။ မြနန္ဒာနှင့်အတူ ပို့မည်ထင်ရဲ့ ။ စစ်ဖြစ်သွားသည်နှင့် မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်ဘွဲ့  ရလိုက်၏။ ဆေးရုံကြီးမှာ နှစ်နှစ် အလုပ်လုပ်ပြီး အမေရိကန်သို့ သွားရသည်။
မြနန္ဒာ မက်ထရစ်အောင်သည့်နှစ်မှာ သူသည် ဆေးရုံကြီးတွင် နှစ်နှစ် အလုပ်လုပ်ပြီး၊ အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ် ပြည့်ပြီး ဖြစ်သည်။ မြနန္ဒာနှင့် ယူမည့်သူမို့ အချစ်စစ်ကို ဘယ်မှာမှ မရှာဘဲ၊ အချစ်များစွာကိုသာ ရှာခဲ့သည်။ လိပ်ပြာပမာ မွေးကြိုင်လှပသော ပန်းတွေ့ရာ၌ နားချင်သော ၀ါသနာရှိတာလည်း အမှန်ပဲ။ အဖိုးတန်သမီးနှင့် လိုက်လျောရန် ကောင်းစွာ သုံးဖြုန်းနိုင်အောင် ပါပါက ငွေပို့ထားသည်တစ်ကြောင်း၊ သူသည် ရုပ်ချောသော၊ ပညာတော်သော၊ အထက်တန်းကျကျ ၀တ်နိုင်သော ဆရာဝန်ပေါက်စ ဖြစ်လေရာ၊ လွယ်ကူးရာ ကျောင်းသူ နာ့စ်မတို့၏ အချစ်များစွာကို ခံယူရသည်။ ကျေနပ်စရာကောင်းသော ဘ၀လို့လည်း ထင်သည်။
ထိုနှစ်မှာ မြနန္ဒာနှင့် လက်ထပ်ရမလို ဖြစ်လိုက်သေး၏။ သို့သော် မြနန္ဒာက ကောလိပ်သွားချင်သေးသည်မို့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းရုံပဲ ပြုရ၏။ တော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်လိုက်၏။ ပါပါတို့ ပိုက်ဆံပေါလှချည်လား ထင်လိုက်၏။ မြနန္ဒာ အရွယ်ရောက်မှ လေးငါးခါသာ မြင်ဖူးခဲ့ရာ စေ့စပ်သောနေ့မှာ အလှတရပ်ကို ကောင်းစွာ သုံးသပ်ခွင့်ရလိုက်၏။
လှလိုက်တဲ့ မြနန္ဒာ။ ကိုကို့ မယားဖြစ်မယ့် မြနန္ဒာဟာ ကျေနပ်စရာပါလားကွယ်လို့ ထင်လိုက်၏။ ကြည့်စမ်း။ ပန်းနုသွေးကလေး တကိုယ်လုံးဆင်ပြီး ပုလဲ၊ နီလာ ရတနာများပြင်လို့။ ပွဲဝင်မယ့် မယားမျိုးပေါ့။ ညိုမောင်းတဲ့ ဆံပင်ကြားက ပွင့်မယ်ကြံရွယ်ဆဲ နှင်းဆီဖျော့နှင့် မြနန္ဒာ ဘယ်သူ ပိုလှသလဲလို့တောင် စိတ်ကူးမယဉ်စဖူး ယဉ်လိုက်ချင်၏။ မြနန္ဒာကတော့ သိပ်ရှက်နေသလို မျက်နှာ နီညိုညိုဖြင့်။ မျက်လုံးလှန်ကြည့်ဖော်မရ။ စကားပြောဖော်မရ။ ပြာလဲ့သော မျက်ခွံမို့နှင့် မျက်တောင်ကော့များသာ မြင်ရ၏။ ထိုတညနေလုံး ဧည့်သည်များ ညစာထမင်းစားပွဲများဖြင့် အချိန်ကုန်ရ၏။ မြနန္ဒာနှင့် ပြန်ခါနီးမှ လသာဆောင်မှာ နှစ်ယောက်တည်း တွေ့ခွင့်ရလိုက်၏။ တီးမှုတ်သံ၊ စကားသံ၊ ရယ်သံတွေကြားမှာ သူပြောသမျှကို ခေါင်းငုံ့နားထောင်နေပြီး ‘ဟုတ်ကဲ့’ နှစ်လုံး သုံးလုံးသာ မြနန္ဒာထံက ရလိုက်သည်။
စေ့စပ်ပြီး မြနန္ဒာတို့အိမ်သို့ ၀င်ထွက်ခွင့်ရှိသော်လည်း သာဦးဂျော်၏ အချစ်များစွာတို့သည် စေ့စပ်ခြင်းသတင်းကြောင့် ဂယက်ထသည်ကို ပြေပြစ်အောင် ပြုနေရသည်မို့ စိတ်ကူးထားသလို မကြာခဏ မ၀င်ထွက်ခဲ့ရချေ။
အမေရိကသို့ သွားရမည်ဆိုသည့်အတိုင်း ပညာထပ်သင်ရန် ယခုက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါသည်။ နိုင်ငံခြားရောက် လျှင် မျက်နှာမငယ်အောင် စာကျက်ရုံမက လက်တွေ့ခွဲစိတ်ရာ၌ ကျွမ်းကျင်ဖို့လည်း ဆေးရုံမှာသာ အချိန်ကုန်ရပါမည်။
စသည်ဖြင့် စာရေး၍ သူ ခွင့်တောင်းလိုက်ပြီး မြနန္ဒာတို့အိမ်မှာ ဧည်ခံကျွေးမွေးပွဲများကိုသာ သူ သုံး လေး ခါ ရောက်ရ၏။ နောက်အမေရိကသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ မြနန္ဒာ လိုက်ပို့သေးတာပေါ့။ သွားခါနီး ‘နန္ဒာ ဘာမှာချင်လဲ၊ ရောက်ရောက်ချင်း ဘာပို့လိုက်ရမှာလဲ’ လို့ မေးတော့ နန္ဒာနှမက ခေါင်းငုံ့ပြီး ကော့ဖြူးသော မျက်တောင်များဖြင့် မျက်လုံးကို ဖုံးအုပ်ပစ်ကာ ‘ဟင့်အင်း’ တစ်လုံးသာ တိုးတိုး ဆိုလိုက်လေသည်။
အမေရိက၌ လေးနှစ်မျှ သူ စာသင်အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်မှာ အိမ်ထောင်ပြု၍ အနည်ထိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်လို့ သူ ထင်လေသည်။ ရောက်စနှစ်၌ ပင်ပန်းလှ၏။ အမေရိကန်ဆေးရုံ၌ လုပ်ခွင့်ရရန် စာကျက်ရ၏။ စာမေးပွဲဖြေရ၏။ နေ့ နှင့် ည ခွဲခြားလို့မရအောင် လုပ်ရ၏။ စက်လို အလုပ်လုပ်ပြီး ဆေးရုံးကပေးသည့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လှသော အခန်းကျဉ်းကလေး၌ အနားရသည်။ မနက်များမှာ အသေလို အိပ်မောကျရ၏။ နိုးလာပြီး တစ်ညမျှ အားသောညမှာ သူသည် ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲ၍ လမ်းထွက်သည်။ လမ်းပေါ်မှာလည်းကောင်း၊ စားသောက်ဆိုင်မှာလည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံမှာလည်းကောင်း၊ ကပွဲမှာလည်းကောင်း စုံမက်ဘွယ် မိန်းမတယောက်ကို ကောက်ယူရရှိမြဲ။ အကြင်မိန်းမအားဖြင့် ပင်ပန်းသောဆေးရုံအလုပ် စာတစ်လုံး မလစ်ရ။ ကျက်မှတ်ရသည့် စာအုပ်၊ ခွဲစိတ်ခန်း၏ညှင်းပန်းခြင်းတို့မှ အနားယူမြဲ။ မိန်းမတယောက်ကို တစ်မျိုး သူ ချစ်လို့ရသည်။ စုံမက်လို့ ရသည်။ စိတ်ပင်ပန်းစရာ မရှိပါ။ မိန်းမတို့သည် တံတားအောက်၌ ဖြတ်စီးသွားသော ရေပမာပင်။ ပြီးတော့ လောကရေးရာနုံချာလှသည့် ကိုကို့ နှမ မြနန္ဒာသာ အရွယ်ရောက်သော ယောင်္ကျား တစ်ယောက်သည် လူ့ဘ၀တွင် အလုပ်နှင့် စာအုပ်ဖြင့်သာ မွေ့လျော်သည်လို့ ထင်စားဝံ့မည်။ သိတတ် နားလည်သူအပေါင်းကမူ သာဦးဂျော်ကို သဘာဝအတိုင်း နေထိုင်တတ်သော သာမန်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ပါပဲ ဆိုတာထက် ပို၍ အပြစ်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
မရင်းနှီးရသေးသော်လည်း သူ ချစ်ချင်နေပြီဖြစ်သည့် မြနန္ဒာ၏ ငွေဘောင်ကွပ်သည့် ဓာတ်ပုံကိုတော့ မှန်တင်ခုံပေါ်တွင် တယုတယ ထောင်မြဲ။ မြနန္ဒာဖို့ လက်ပွေ့အိတ်နှင့်ဖိနပ်ဆင်တူ လှလှတွေ့ရင် ၀ယ်ပို့မြဲ။ တခါ ပုလဲတုနှင့် ကျောက်ပြာခြယ်သသည့် ဇာထဘီစ ၀ယ်လိုက်မိ၍ နေ့လည်စာ နှစ်ပတ်မျှ အငတ်ခံနေလိုက်ရသေး၏။ သို့သော် မြနန္ဒာက ဓာတ်ပြားများသာ မှာသည်။ ဓာတ်ပြားဘိုး ပိုက်ဆံပို့သည်။ ရှေးသီချင်းကြီးများကို သူ နားမလည်သည်မို့ အရောင်းစာရေးမလေး အကူအညီ ယူရ၏။ ထို အရောင်းစာရေးမလေးနှင့် သိကျွမ်းသွားပြီး ကလေးမအခန်းသို့ပင် တညအိပ် သွားလည်ဖူးသေး၏။ နောက်တော့ ဓာတ်ပြားဆိုင် ပြောင်းဝယ်သည်။ မြနန္ဒာနှင့် လက်ထပ်ရမည့် သာဦးဂျော်သည် တွယ်ငြိခွင့်မရှိ။ မတွယ်ငြိနိုင်ပါ။
ပါပါ ထံသို့ လစဉ် စာရေးရ၏။ မြနန္ဒာထံသို့ သုံးလေးလ တစ်ကြိမ် စာရေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ နန္ဒာ ကိုကို့ ကို ချစ်ရဲ့လား ဆိုတာမျိုး ပါသွားတတ်လျှင် အဖြေပြန်မလာချေ။ သူကလည်း မပူပင်ပါ။ အချိန်များစွာ ရှိပါသေးသည်။ မြန်မာပြည်သို့ပြန်လျှင် တွေ့ဆုံ ယှဉ်တွဲ သွားလာရဦးမည်။ အရင် ခင်မင်ရဦးမည်။ သမီးရည်းစား ဖြစ်ရဦးမည်။ တက္ကသိုလ်တွင် မြနန္ဒာ၏အလှ ကျော်ကြားပုံတွေ ကြားသိရ၏။ ကျေနပ်ရ၏။ မြနန္ဒာဖို့ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန် ၀တ္တုစာအုပ်များ ပို့ရပြန်တော့ မာနတက်၏။ ပီယာနို၌ တီးဖို့ ဂီတသင်္ကေတ စာအုပ်များ ပို့ရပြန်တော့ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်များကိုသာမက ရင်းနှီးသော ကိုယ့်ဆရာကြီးများကိုတောင် ထယ်ဝါတောက်ပသော နှမ မယားလောင်း အကြောင်း ပြောပြမိ၏။ မြနန္ဒာ၏ သတင်းမျှဖြင့်ပင် နိုင်ငံခြားသားတို့က သူ့ကို အထင်ကြီးလာပြန်သည်။
သို့သော် မြနန္ဒာ ဘီအေနောက်ဆုံးနှစ်၌ ကဗျာဆရာ လင်းထင်နာမည်ကို ကြားလာရ၏။ ပါပါ က မြနန္ဒာ မိုက်မဲပြီလို့ပင် ယူဆလိုက်၏။ ကိုကို စာသင်နှစ် ကုန်ဆုံးသည့်လမှာ ချက်ချင်း ပြန်လာဖို့ အမိန့်ပေး၏။ ဘီအေဖြေပြီး ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်းမှာ ကိုကို့ နှမကို ပိုင်ဆိုင်ရတော့မည်ပင်။
‘လက်ထပ်ပြီးတော့ အင်္ဂလန်နဲ့ ဥရောပကို လည်ကြဦးပေါ့၊ သမီးနန္ဒာ ပြည်အပြင်မှ မထွက်ရသေးတာ၊ ကိုကိုလည်း ရောက်ရာမှာ ပညာထပ်ဆည်းပူးဖို့ပဲ’ ဟု ပါပါက စီစဉ်ပြန်လေသည်။
ကိုယ့်အကြောင်းသာတွေးတတ်သည့်၊ ကိုယ့်ဘက်ကသာ တွေးတတ်သည့် ကိုကို့နှမကတော့ လက်ထပ်သည့်နေ့မှာတောင် မျက်လုံးဖြင့် လှန်ကြည့်ဖော်ရသည်မဟုတ်။ ညစာ ထမင်းပွဲမှာ စားစရာ တခန်းပြီး တခန်း ချလာဆဲ။ ၀ိုင်နီကိုလည်း ကုန်အောင်သောက်၏။ ၀ိုင်ဖြူကိုလည်း ကုန်အောင်သောက်၏။ ထမင်းပွဲမှာ အထူးသီးသန့်ရွှေးဖိတ်သည့် ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများက မြနန္ဒာကို အကြီးအကျယ် အကဲခတ်ကြ၏။ ကိုကိုက ခါတိုင်းထက် ရွှင်လန်းပြီးနေသည်။ စကားများစွာ ပြောရသည်။ မြနန္ဒာ ကြိုက်တတ်တယ်ရယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုဟန်ဖြင့် စားပွဲထိုးကို မျက်ရိပ်ပြလို့ မြနန္ဒာ ဖန်ခွက်၌ ဖြည့်စေရပြန်၏။ ထမင်းပွဲပြီး၍ မီးလုံး နီ ပြာ စိမ်း ၀ါ ထွန်းသော ပန်းခြံတွင်းမှာ လက်က ဖန်ခွက်ဖြင့် မတ်တပ်ရပ်၍ စကားပြောနေကြသည့် ဧည့်သည်များနှင့် စကားလှည့်လည်ပြောရပြန်တော့၊ မြနန္ဒာ ခြေမယိုင်အောင်တစ်ကြောင်း လက်မောင်းကို ပေးအပ်၍ တွဲမ စေရပြန်သည်။
ကိုကိုက သူများမကြားအောင် အသာကလေး ပြောရသည်။ မြနန္ဒာ မနာကျင်ရအောင် နူးညံ့စွာ ပြောရသည်။
‘ဟဲ …… ဟဲ…. မူးနေပြီ ကိုကိုရဲ့’ တဲ့။ ခုမှ သူ့ကို ရဲရဲမော့ပြီး ကြည့်လိုက်သော မြနန္ဒာသည် ရယ်ပြီးရင်း ရယ်နေသော်လည်း မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်များပြည့်လျက်ရှိသည်ကို မြင်လိုက်ရလေ၏။
အားလုံး က ကြပြန်တော့ ကိုယ့်အကြောင်းသာ တွေးတတ်သည့် ကိုယ့်ဘက်ကသာ တွေးတတ်သည့် ကိုကို့နှမကတော့ ကိုကို ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိပုံမရ။ သတိရပုံမပေါ်။ ကိုကိုနှင့် ခြေအကွက်ကျအောင်သာ လမ်းလျှောက်၍ လိုက်နေသည်။ ဧည့်သည်တစ်ချို့  က ပြုံးကြသည်။ တစ်ချို့ က ကိုကို့ ကို ကြည့်ကြသည်။ ပါပါ မျက်မှောင် အနည်းငယ်တွန့်နေသည်။ မာမာက စကားများစွာ ပြောနေသည်။ ကိုကိုက လသာဆောင်ဘက် ထိန်းခေါ်လာပြီး ခပ်သွက်သွက် ထွက်ခဲ့ရ၏။ ‘ဒါလင်ကို ညာခေါ်လာတာ’ လုိ့ ပြောရသေး၏။ ရယ်ပြီးရင်း ရယ်နေသော မြနန္ဒာသည် တောင်ထန်းပင်များကြားမှာ စကားပြော၏။ ငိုရှိုက်သံဖြင့် ပြော၏။ တစ်ခါတုန်းကလည်း ဒီလိုဘဲ။ ဘယ်သူ့ကိုပါလိမ့်။ နန္ဒာ ညာခေါ်လာတာတဲ့။ သူကလည်း ကိုကို့ လို မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သိပ် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာပဲ ကိုကိုရဲ့  တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်ချင်နေသော ကိုကိုကတော့ မခံချင်တစ်ဝက်၊ မကျေနပ်တစ်ချက်၊ ပိုင်ချင်တာတစ်ဘက်နှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွေ့ယူပြီနမ်းတော့ သူကလေးက ငိုပြန်သည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမှ မနမ်းပါဘူးတဲ့။ စကားတွေဘဲပြောနေတာပဲတဲ့။ နမ်းစရာလည်း အကြောင်းမရှိတာတဲ့။ သည်လို ဆိုပြန်တော့လည်း ကိုကိုသည် ကျွဲခိုးပေါ်သော နှမအငယ်ကို သနားကြင်နာစွာနှင့် အသာကလေး တစ်ဖန် နမ်းရပြန်၏။
ပြီးတော့ မျက်တောင်များစင်းလာသည့် သတို့သမီးကို ကြည့်ပြီး ရယ်မောမိပြန်သည်။ ပြီးတော့ မြနန္ဒာ မမြင်အောင် သက်ပြင်းခိုးချပြီး ‘ဧည့်သည်တွေမပြန်သေးဘူး နန္ဒာရဲ့ ။ မအိပ်ချင်ပါနဲ့ဦး’ ဆိုတော့ ခေါင်းသာ အသာညိတ်ပြသေးသည်။
အင်္ဂလန်သို့မသွားချင် ရန်ကုန်မှာ လေးလလောက် နေကြဆဲ။ မြနန္ဒာကတော့ ညစဉ် ခပ်မူးမူးဖြစ်နေသည်။ ညစဉ် ရှန်ပိန်ပုလင်း အိပ်ခန်းထဲသယ်လာသည်။ ကိုကိုက လန်ဒန်သွားဖို့အရေး ဆေးရုံသို့ပြေးရ၊ ရုံးပေါင်းစုံပြေားရနှင့်မို့ ညနေစာအမီ မနည်းပြန်ရ၏။ နှစ်ယောက်အတူ ညစာ စားလျှင် ကိုကိုကသာ ဒိုင်ခံစကားပြောရ၏။ ပြီးတော့ နန္ဒာက ရှန်ပိန်ပုလင်းကိုဖက်၊ ကိုကိုက နန္ဒာကိုဖက်ပြီး အိမ်ပေါ်တက်လာမြဲ။ သူကလေးက အိပ်ယာပေါ်မတက်ခင် ပီယာနို၌ ထိုင်မိလျှင် သီချင်းဖြစ်အောင် မတီး။ လေလွင်သော လက်များနှင့် ကြေကွဲဝမ်းနည်းသော အသံများကို တို့ လို့ နေတတ်လေသည်။
မောမောနှင့် အိပ်ရာထဲလှဲလျှင် တွေ့ရသည်မှာ မြနန္ဒာ ပြင်ဆင်ထားသော နှင်းဆီပန်းစိုက်အိုးများက မင်္ဂလာအိပ်ခန်း တစ်ခန်းလုံး မွေးကြိုင်နေစေ၏။ မြနန္ဒာ ဧည့်ခန်းမှ အိပ်ခန်းတွင်းသို့ ရွေ့ပြောင်းလာခဲ့သော ရေဒီယိုဂရမ်မှ တီးလုံးဓာတ်ပြားမှ သာယာငြိမ့်ငြောင်းသော အသံများလည်း လှိုင်နေ၏။ သတို့သမီးကသာ သူ့ကို သတိရဟန်မတူဘဲ အနောက်တိုင်းသူ ထုံးစံအတိုင်း မှန်သားလို မမြင်ရ မကြည်လင်သေည်လည်း ပါးပါးလဲ့လဲ့ ရှိသော နိုင်လွန်ဇာနက် ည၀တ်အကျီရှည်ဖြင့် တဖန်ခွက်ပြီး တဖန်ခွက် ရှန်ပိန်ငှဲ့ သောက်နေသည်။ ကြည့်လို့တော့ ကောင်းသားပဲဟု တွေးမိတတ်၏။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုဘဲ။
တစ်ညတလေတော့လည်း သူသည် သည်းမခံချင်တော့ပဲ မြနန္ဒာရဲ့  ရှေးသီချင်းကြီးများကို ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး တီးလုံးကို ဖွင့်၏။ နန္ဒာ့ ဖန်ခွက်တိုင်းကို ခေါင်းချင်းတေ့၍ ပါးချင်းကပ်ကာ လုသောက်၏။ ရှန်ပိန်များ ဖိတ်စင်ကုန်တတ်လေ၏။ မြနန္ဒာ ရယ်မောလာပြီး သူတို့သည် နှစ်ဦးသဘောတူ ရယ်ကြပြန်၏။ ကိုကိုပါလာလျှင် ကော့တေး ကြမ်းကြမ်း သောက်မိတတ်ပြီး နှစ်ယောက်လုံး သိပ်မူးပစ်တတ်သည်။ နောက်ဆုံး နှစ်ယောက်သား ယိမ်းထိုးပြီးနေလျက်က က ကြသေး၏။ နောက်ဆုံး နှစ်ယောက်သား ရယ်ပြီးလျှင် ရယ်ရင်းနှင့် အိပ်ရာထဲ ပစ်လှဲမိလျှင် နှမ မြနန္ဒာသည် အမူးပြေသွားသလို မျက်လုံးများ ပြူးကျယ်လာပြီး ကိုကို့ ကို စိုက်ကြည့်ပြီး မျက်ရည်လျှံတတ်ပြန်သည်။
ပြီးတော့ မြန်မာကဗျာ ဖတ်ပြီး ငိုသည် တဲ့။
နှုတ်ရွ ပန်းလျ၊ သက်ပြင်းချနဲ့
သူ စခေါ်မှ၊ သတိရတတ်
ပြီးတော့ အိပ်မက် မက်ပြီး ငိုသည်တဲ့။
ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုသံကြားလို့ တရေးနိုးရသည်။ မြနန္ဒာ အိပ်ပျော်လျက်က မျက်ရည်တွေ စီးကျလျှံဝေလို့ ငိုပြန်တော့ အလန့်တကြား လှုပ်နိုးရပြီး ‘နန္ဒာဒါလင် နန္ဒာဒါလင်’ လို့ ခေါ်မိရသည်။ ကိုကို့ နှမက နိုးလာသော်လည်း မချုပ်တည်းဘဲ ငိုပြန်သည်။ ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲမှာ မပျော့ခွေဘဲ တောင့်တင်းပြီး ချော့မရအောင် ငိုပြန်သည်။
‘ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒါလင် ရယ်။ ဘာများ ၀မ်းနည်းစရာ ရှိလို့လဲ’ လို့ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် မေးတော့………..
‘နှင်းဆီပွင့်ပါတဲ့ အိပ်မက် မက်လို့ပါ’ တဲ့။ ဒီအိပ်မက် ခဏ ခဏ မက်တတ်တယ်တဲ့။
နန္ဒာ ဘာ အိပ်မက် မက်သလဲ။ ကိုကို မမေးတော့ပါဘူး။
မေးဘို့လည်း မလိုပါဘူး။ နန္ဒာသာ ညစဉ် အိပ်မက် မက်သူ ဖြစ်သည်။ အိပ်မက်များမှာ ခမ်းနားကြီကျယ်လှသည်။ အရောင်စုံသည်။ အသေးစိတ် နုနယ်သည်။ ဂီတသီချင်းများ အစ အဆုံး ကြားရတတ်သည် တဲ့။ ၀တ္တုတပုဒ် အစအဆုံး ဖတ်နေတတ်သည် တဲ့။ မမြင်ဖူးသောသူများ၊ မရောက်ဖူးသော ဒေသများ ပါလာသည် တဲ့။ မြနန္ဒာရဲ့  အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုကို မပါတတ်တာ၊ အမြဲတမ်း မြနန္ဒာ တစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေရတတ်တာတွေလည်း မမေးဘဲ ပြောပြတတ်သေးတော့ ကိုကို့နှမဟာ ကိုယ့် ကိုသာ စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ့်ဘက်ကသာ တွေးတတ်တယ်လို့ ထင်ရင်မှားသည်လားကွယ်။
အိပ်မက် ဒီလောက် မက်နေတာ စိတ္တဇ ဝေဒနာဖြစ်နေသလားမှ မသိတာ လို့ တစ်ခါ စတော့ မြနန္ဒာက စိတ်ဆိုးလှသည်တဲ့။
သို့ပေမည့် ဘယ် သတို့သမီးမှ ညားစမှာ သည်လောက် ကိုယ့်စိတ်နှင့် ကိုယ် ဗျာများမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ မြနန္ဒာဟာ ကိုယ် ကို ချစ်လာနိုင်မယ့်သူမှ ဟုတ်ပါမလားဒ။ တစ်သက်လုံး စိတ်ကူးယဉ် မိုက်မှားခဲ့သူကလေးများလား။ ကိုကိုနဲ့ ယှဉ်တွဲရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ တာဝန် သိပါ့မလား။ ပီယာနိုတီး ဓာတ်ပြားဖွင့်၊ စာဖတ်ပြီး အိပ်မက်များနဲ့ နပမ်းလုံးနေမှာလား။ ကိုကို့ဘ၀၊ ကိုကို့အလုပ် ဆိုတာကိုရော သတိရတတ်ရဲ့ လား။
ထိုသံသယများသည် အခွဲအစိတ်၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော ဆရာဝန် လင်သည်ကိုကိုရဲ့  စိတ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးလေးလ အတွင်းမှာပဲ ပီပီသသ ပေါ်ခဲ့သည်။ ညိုမောင်းသော ဆံပင် သရဖူနှင့်၊ အေးဆေးကြည်လဲ့သော မြနန္ဒာရဲ့  မျက်လုံးများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြန်တော့ ‘အို…. သည်ကလေးသဖွယ် လောကီကိစ္စ မလည်မ၀ယ်လှတဲ့ နှမကလေးဟာ ကြီးရင့်လာမှာပဲ။ သိတတ်လာမှာပဲ။ စိတ်ကူးတို့၊ အိပ်မက်တို့ဆိုတာ လူ့လက်တွေ့ဘ၀ကို စိုးမိုးဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလာမှာဘဲ’ ဟု ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့် မျှော်တွေးရပြန်သည်။
ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဦး လေးလမှာ သူတို့ရဲ့  ဘ၀ကို တကယ် စတင်ရသည်မဟုတ်သေး။ ကိုကိုက ဆေးရုံကြီးမှာ သွားပြီး အလုပ် လုပ်နေလိုက်သေး၏။ အင်္ဂလန်သွားဖို့ ကိစ္စများမြောင် နောက်ကို လိုက်ရသေး၏။ စာတစ်ဘက် ဖတ်ရသေး၏။ လန်ဒန်ဆေးရုံ နှင့် သံကြိုး အပြန်အလှန် ရိုက်ရသေး၏။ စာ အပြန်အလှန် ရိုက်ရသေး၏။ ညနေစောင်းမှာ လက်နှိပ်စက်တစ်လုံးနှင့် အလုပ်များလှဆဲ။ မြနန္ဒာက အိပ်ခန်းထဲမှာ ပြင်သစ် အချစ်ဝတ္တုများ ဖတ်နေသည်။ ပါပါနှင့် ဆွေးနွေးဆဲ။ နန္ဒာက သူ့ကိစ္စ မပါသလိုနေမည်။ သူ့ မာမာနှင့် စကားများ စိတ်ကောက်နေမည်။ ထမင်းစားဖိတ်သော အိမ်များကို နှစ်ယောက်တည်း သွားရောက် လည်ပတ်ရလျှင်တော့ သူတို့ လင်မယား တော်တော် ခင်မင်လာသည်။ မြနန္ဒာသည် ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ ဆက်ဆံတတ်သည်။ လူရှေ့ မှာ ကိုကို့လက်မောင်းကို ခိုတွယ်လို့ နေတတ်သည်။
ရုပ်ရှင်မင်းသားနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည့် တပည့်ဟောင်း ဆရာဝန်မတယောက်၏အိမ်မှာ ညစာ စားရတာကို သတိရ၏။ အိမ်ရှင်မက မြနန္ဒာ၏အလှကို တအံ့တသြ ချီးမွမ်းဆဲ။ သူ့ယောင်္ကျား ရုပ်ရှင်မင်းသားက ဂီတအကြောင်း၊ ကဗျာအကြောင်း ပြော၏။ ရုပ်ရှင်မင်းသားရဲ့  မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လင်းထင်အကြောင်း ပြော၏။
အို…. နန္ဒာနဲ့ ခင်တာပေါ့။သူ့ကဗျာဆို အားလုံး ရတာပဲ။ သူ နောက်ဆုံးစပ်တဲ့ ကဗျာကတော့ လို့ ကိုကို့ နှမက သိမ်မွေ့စွာ ပြောပြီး ကဗျာတပုဒ် ရွတ်ဆိုလိုက်၏။
စကား ဟဟ ဆိုမရဘူး
လမ်းကြုံလာလှည့် ဖြေပါဘိကွယ် (လမ်းကြုံတလှည့် နမ်းဖြေတကွယ်
အိပ်ခန်းကိုယ်တည်း တ သ ညည်းသံ
ပြီးတော့ မြနန္ဒာသည် ပီယာနို၌ ထိုင်ကာ လေပွေမွှေ့သံ မိုးပေါက်ပြေးသံများပါသော မိုးဇတ်ရဲ့  နွေဦးတီးလုံးကို တီး၏။ ‘ကိုကို ကရအောင်’ လို့ စတင်ဖိတ်ကြား၏။ ထိုည ကကြသော ဧည့်သည်တို့အလယ်မှာ မြနန္ဒာရဲ့  မျက်နှာကလေးဟာ အလှဆုံးသာမက အရွှင်လန်းဆုံးလည်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပြန်၏။ သည်တော့ ကိုကို့ နှမကို ကိုကို နားမလည်သေးပါဘူးလို့ အိမ်အပြန် လမ်းတလျှောက်လုံး စိတ်ကူးဆဲ။
အိမ်ကျတော့ ခါတိုင်း ကိုကိုက မေးနေကျ စကား မြနန္ဒာက မေးလေသည်။
‘ကိုကို့ ကို နန္ဒာ မချစ်ဘူးလား’ တဲ့။
‘ကိုကို နားမလည်ပါဘူး’ လို့ မျက်မှောင်ကြုတ်မိလျှင် နန္ဒာက တစ်ချက်ရယ်ကာ ‘ကိုကို့ ကို နန္ဒာ မချစ်ဘူးလားလို့ …. ကဲ’ လို့ ထပ်ပြောပြန်၏။ နောက်အပတ် လန်ဒန်ရောက်ရင် ကိုကိုနဲ့ နန္ဒာ ပျော်မှာပါ။ နှစ်ယောက်တည်းရှိမှာပါ။ အိမ်အသစ်ဆောက်ရမှာ အသစ်မွေးရမှာလို့ ပြောသည်။
ဟုတ်သည်။ ကိုကိုနှင့် နန္ဒာ နှစ်ယောက်တည်း စတင်ကြဖို့ ကိုကို မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ နန္ဒာနှင့် လက်မထပ်ရခင်က တွေ့ခဲ့ရသည့် အချစ်များစွာတို့ကို သတိမရတော့တာ နှုတ်မဆက်ချင်တော့တာ အမှန်ပင်။
လန်ဒန်၌ လေးနှစ်မျှ နေကြသောအချိန်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် အပျော်ရွှင်ဆုံး အချိန်လို့ ဆိုရမည်ပင်။ နန္ဒနှင့် ကိုကိုတို့ လက်ထဲမှာ ပါပါပို့သောငွေနှင့် အပူအပင်မရှိ လည်ပတ်ကြရ၏။ ရန်ကုန်မှာလို ခိုင်းစရာလူ တွေအလယ်မှာ မြနန္ဒာ ငေးမောနေလို့မရ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်၊ မြေအောက်ရထားပေါ် တိုးဝှေ့ခုန်တက်သွားလာ ဈေးဝယ်ထွက်ကြရ၏။ ကို့ကို့ဆေးရုံနှင်းနီးသော ရပ်ကွက်မှာ အိမ်ခန်းငှားပြီး နေကြ၏။ နံနက်ခုနှစ်နာရီ အမီ အလုပ်သွားရသော ကိုကိုစားမီအောင် မြနန္ဒာစောစော ထတတ်လာသည်။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် သန်းခေါင်သန်းလွဲ စာဖတ်နေတတ်ပြီး နေမြင့်မှ အိပ်ရာထမြဲ။ ခုတော့ နွားနို့ထကြိုရ၏။ ကြက်ဥ၊ ၀က်ပေါင်ခြောက်၊ ကြော်ရ၏။ ပေါင်မုန့်ကင်ကာ ထောပတ်သုတ်ရ၏။ ကိုကို နွားနို့နှင့် ပြောင်းဖူးခြောက်စားဆဲ။ နန္ဒာသည် လင်၏မျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကာ အံ့သြစရာတွေ တွေ့တတ်လေသည်။
ကိုကို အလောတကြီး စားသောက်လျှင် စိတ်ဆိုးတတ်၏။
အို သူကလဲ ဆေးရုံ ဘယ်ပြေးမှာလဲ။ ၀အောင်စားစမ်းပါဦး ဟု ဆိုတတ်၏။
ဒီနေ့ကိုကို ခွဲစိတ်ရမယ့်နေ့ နန္ဒာရဲ့။ ၆ နာရီခွဲလောက် ဦးအောင်ရောက်နေမှကောင်းတာ။ နန္ဒာကတော့ တစ်နေ့လုံးပျင်းနေမှာပဲနော်၊ စောစောပြန်လို့ရရင် ပြန်ခဲ့မယ်။
နေ့လယ် ဖုံးဆက်ဦးမလား လို့ နန္ဒာက ရှက်သလိုနှင့် မေးသေး၏။
အားရင်၊ သတိရရင် ဆက်မှာပေါ့ ဒါလင်ရဲ့။ ဆေးရုံမှာ ဘယ်လောက် ပြေးလွှားလုပ်နေရတယ်ဆိုတာ ဒီကလေးမ မသိပါဘူး။
မဆက်ချင်နေပေ့ါ ဆိုပေမည့် ပြုံးချိုနေသည်။
ကိုကို စာကျက်ရပြန်လျှင် နန္ဒာ စားပွဲနားရစ်ဝဲနေတတ်သည်။ ပြီးတော့ သက်ပြင်းချ၍ စာတစ်အုပ်နှင့် အိပ်ရာပေါ် သွားနေပြန်သည်။ ကိုကို့ကို လှမ်းပြီး ငေးမောကြည့်ကာ စကား စ, လိုက်၊ သူ့ဘာသာ ချုပ်တည်းလိုက်နှင့် နေပြန်သည်။ မြနန္ဒာ တွယ်ငြိလေပြီ - အချစ်ဆိုတာ ဒါပဲ။ အိမ်ထောင်အဖြစ် အဖို, အမ တွဲဖက်နေထိုင်သောဘ၀။ သားသမီး ပွားစီးသောဘ၀။ သည်မှာသာ အချစ်ရှိသည်။
ပြီးတော့ မကြာခင်ပင် နန္ဒာရဲ့သား၊ ကိုကို့ရဲ့သားကို မွေးဖွားရတော့မည်။ ကိုကို အားသော ညများမှာ မြနန္ဒာကို ခေါ်လို့မရတော့။ သိပ်မလည်ချင်တော့။ ပြဇာတ်နှင့် ဂီတပွဲရုံများကို ဆောင်းဦးပေါက်ရာသီမှာသာ သွားချင်တော့သည်။ ပီယာနို ခပ်လတ်လတ် တစ်လုံးကို ဈေးချိုချိုနှင့် ၀ယ်လိုက်ပြီး ထိုင်တီးနေသည်သည်သာ များ၏။ နန္ဒာသည် သူမွေးရမည့်ကလေး၌ စိတ်ဝင်စားကာ ပြင်ဆင်နေသည်မို့ ကိုကို့ကို သိပ်မနှောင့်ယှက်တော့ချေ။ ကိုကိုလည်း ဆေးရုံ ညတာဝန်များ မလစ်ဟင်းလှတော့ချေ။ တစ်ခါတစ်လေ ညတာဝန်မရှိပဲ ဆေးရုံမှာ စာကျက်နေလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်း လူပျိုဆရာဝန်များနှင့် ထွက်လည်မိသေးသည်။
ပြီးတော့ အနောက်နိုင်ငံဓလေ့ကို နှစ်သက်သည်မှာ အမှန်မို့ သူသည် အနောက်နိုင်ငံဓလေ့အတိုင်း(ယခင်က နေဖူးသောဘ၀အတိုင်း) စိတ်လိုသောညများမှာ အပြင်ထွက်နေပြန်သည်။ မယား မြနန္ဒာ ကတော့ မေးမြန်းစုံစမ်းတတ်သည်မဟုတ်။ သံသယ ဖြစ်တတ်သည်မဟုတ်။ ညပြန်မလာလျှင် ဆေးရုံတာဝန် ရှိလို့သာပဲ မှတ်လိုက်သည်။ ကိုကိုသည် ဘာမျှ အလေးအနက် မထားတာမှန်သည်မို့ မြနန္ဒာအပြင် ဘယ်သူမှ မချစ်လျှင် ပြီးသည်ထင်သည်မို့ ညစာကျွေးလို့ရသော နာ့စ်မလေးများ၊ လက်နှိပ်စက် စာရေးမလေးများနှင့် ဆက်မိပြန်၏။ သူတို့အခန်းသို့ ညအိပ်ရောက်ပြန်၏။ ပြီးတော့ နန္ဒာကလည်း မွေးဖွားလုပြီပင်။
လူပျိုဆရာဝန်များနှင့် ပါရီသို့ ကူးလူးတတ်ပြန်သည်။ ပါရီဆိုသည်မှာ နုံအ, တယ်ဆိုရမည့် မြနန္ဒာ အဖို့ အနုပညာဆိုတာ သတိရသော မြို့ပင်။ လုဗ် ပန်းချီပြတိုက်ကိုသာ သွားချင်၏။ ရှောန်ဆဲလီဆီး ကို လျှောက်ချင်၏။ ကလေးမွေးပြီးမှ ကိုကိုနှင့် လိုက်လည်မည်။ တစ်ခါတလေ ကလေးမမွေးခင်ပဲ လိုက်လည်တော့မည်ဟု ပူဆာလျှင် ကိုကိုက အတင်းထားခဲ့တတ်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေပါမှာ ဒါလင်ရဲ့။ ဘယ်ကောင်းမလဲ။ ကိုကိုနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း သွားလို့ရမှ ခေါ်မှာ ကိုကိုသည် သာမန်ယေက်ျားပီပီပင် မိန်းကလေးများစွာကို တစ်သက်လုံးညာခဲ့သည်ဖြစ်၍ နှမ မြနန္ဒာကိုလည်း အလွယ်တကူညာလျက် ရှိသည်။ ဒါကို နောက်မှသိရသည့် နန္ဒက ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခဲ့။
သို့ပေမည့် နန္ဒာနားလည်ဖို့ ကောင်းတာက နန္ဒာ က ကိုကိုလက်ထပ်ယူထားတဲ့ မယားပဲ ဆိုတာပင်တည်း။ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ဘ၀၌ ကြောင်းခြင်းတ များစွာရှိမြဲဆိုတာ နန္ဒာမသိတာ၊ မယုံကြည်တာ၊ လက်မခံတာဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိ မသိသား ဆိုးရွား လှသည်လို့ ထင်၏။ လူ့လောကသည် ယောက်ျားတို့၏ လောကဖြစ်တာကို ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် အတိုင်းမသိ လွတ်လပ်ခွင့် ရရှိလေသည်။ ကိုကိုသည် လောင်းကစားတတ်သူလည်းမဟုတ်။ ဖဲတောင် အိပ်ပျက်ခံ ရိုက်သူမဟုတ်။ သူ့မှာ အချိန် လည်းမရှိ။ ၀ါသနာလည်း မရှိလို့ ဆိုကြပါစို့ ဆက်ဆံရသမျှ မိန်းကလေးတို့ကို ၀ီစကီခွက်လဲနှင့် သောက်ရသလိုသာ အောက်မေ့သည်။ သောက်တုန်း မူးတုန်း ခဏပဲ မနက်ကျတော့လည်း ပြေသွားတာပဲ။ အရက်ကမှ လွန်လျှင် နောက်တစ်နေ့ ခေါင်းကိုက်နာ၊ အာရုံကြောနာ ကျန်ရစ်သေးသည်။ သူ ဘယ်အခန်းမှာ အိပ်အိပ် ၇နာရီ ဆေးရုံအမီ ထပြေးမြဲ။ ခွဲစိတ်ရာ၌ စိတ်အားထက်သန်ခြင်းဖြင့် မျက်လုံးများ ပြောင်လက်မြဲ။ အားလုံးကို မေ့မြဲ။ ပြန်လည် သတိရလျှင် ကိုကို့ မြနန္ဒာကိုသာ ဖြစ်၏။
သားဦးကို မွေးတော့ သူ ပါရီမှာ ရောက်နေခဲ့သည်၊ ဆယ်ရက်စောမွေးတော့ ကိုကို အိမ်မှာ မရှိသည်နှင့် ကြုံနေတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက အီတာလျှံမလေးနှင့် သူပျော်ပွဲစားထွက်ပြီး ပြန်အရောက်မှာ စေးကရက်ဟတ်ဆေးရုံမှ ဖုံးဆက်၍ သံကြိုးစာဖတ်ပြသည်။ အယ်လီနာကို ကမန်းကတန်း တောင်းပန်ထားပစ်ကာ လန်ဒန်သို့ ပြန်ခဲ့ရ၏။ နှမအလိမ္မာလေးက
‘ကိုကို အလုပ်များနေရင် ဖြည်းဖြည်းမှ ပြန်ခဲ့ပေါ့၊ ရပါတယ်’ လို့ ဆိုသေး၏။ ကိုကို့အဖို့ နန္ဒာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မသိသလိုပဲ။ ပြီးတော့ နန္ဒာ့အပေါ် ကိုကို သစ္စာရှိနည်းကိုလည်း မသိသလိုပဲ။ ဒီတဒင်္ဂမှာ ကိုကိုဟာ မြနန္ဒာထံကို လူသတ်ရသတ်ရ မရအရ ပြန်ခဲ့မည်ဆိုတာကို မသိသလိုဘဲ။
နောက်နေ့မနက်မှာ ကမ္ဘာကျော် ပလတ်စတစ် ဆာဂျင်ကြီး ခွဲစိတ်မည်ကို ကူညီခွင့်ရတာလည်း သူလက်လွှတ်လိုက်တာ မြနန္ဒာက တန်ဖိုးထားသည်မဟုတ်။
သစ်ခွပန်းအရောင်မျိုးစုံကို တပွေ့ကြီးဝယ်သွားပြီး နန္ဒာရဲ့ ဖျော့တော့သွားသော မျက်နှာကလေးကို မွှေးနမ်းရတော့ ရင်ခွင်ထဲပွေ့ထားသည့် သားဦးလေး မျက်နှာကို ပါ နမ်းရပြန်သည်။ သားကလေးရဲ့ အနံ့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီအရွယ်မှာ ညှီတီတီပေါ့။
မြနန္ဒာက သားဦးကလေးနှင့် ရူးနေသည်။ ကလေးနှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်အထိ အိမ်ထဲမှာ ကုပ်နေသည် လက်တွန်းလှည်းကလေးနှင့် လမ်းထိပ်လောက်ပဲ ထွက်သည်။ ကိုကိုနှင့် ညစာထွက်စားမြဲ မစားတော့။ မလိုက်ချင်တော့။ သာဦးကလေးကို ကလေးစောင့်မည့်သူနှင့် စိတ်မချ၊ မထားခဲ့ရက်။ နန္ဒာသည် သူစိတ်ဝင်စားသော ကိစ္စနှင့် နေပြန်ပြီ။ ကိုကိုတစ်ယောက်တည်း ညစာထွက်စားရသည်။ သည်တော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်တည်း ညစာထွက်စားသည်ဆိုသည်မှာ နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းခြင်းရာများ ပါလာမြဲ။ နန္ဒာသာ သည်ထက်ကြီးရင့်သော မိန်းမဖြစ်လျှင် ဆွေးနွေးဖို့ပင်ကောင်းသေး၏။
သို့သော်နန္ဒာသည် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော၊ အိပ်မက် မက်တတ်သော၊ လောကအကြောင်း နားမလည်သော မိန်းမငယ်သာဖြစ်၏။ ခေါင်းမာသူ ဆိုတော့ အသက်ဘယ်လိုရလာသလဲ။ သားသမီးဘယ်လောက်ရလာလဲ။ စိတ်ကူးယဉ်မြဲ။ အိပ်မက်မက်မြဲ ရှိသည်။ သူ့ဒုက္ခသူရှာမြဲရှိမည်။ ကိုကိုညာသမျှကို ယုံကြည် ပျော်ရွှင်နေတာကိုလည်း မဖျက်ဆီးလိုလှ။ တစ်နေ့မှာ သူသိတတ်နားလည်လာမည်လို့ မျှော်လင့်ချင်သည်။ ညာနေဖို့မလိုသော ကိုကို၊ မိန်းကလေးများကို ထည်လဲဖြင့် တွဲချင်သည်ကိုကို၊ ပြက်လုံးအဖြစ် ရယ်မောကာ ပြောဆိုနိုင်သော ဘ၀ကို ရလိုသည်။ လိင်စိတ်ဆိုတာ သည့်လူ့ဘ၀၌ အရေးကြီး၍ ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖို့ အလိုရှိလျှင် လွတ်လပ်စွာ အဓိပ္ပါယ်ဖော်နိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ မြနန္ဒာ သိစေချင်သည်။ အဖိုဆိုသည်က သတ္တဗေဒ သဘောအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမရှိ။ သားသမီးမွေးမြူ ကြီးပြင်းစေရခြင်းမရှိ။ အမဆိုသည်ကို တပ်မက်ချင်သလောက် တပ်မက်နိုင်၏။ လိုက်စားနိုင်၏။ အချစ်ဆိုသည်မှာ လင်နှင့်မယား မှာသာရှိ၍ ကိုကို့အချစ်သည် မြနန္ဒာ၌သာ ရှိသည်ဆိုတာကို နားလည်ကျေနပ်စေချင်သည်။ ပြီးတော့ အိမ်မှထွက်ခွာသွားသည့် တဒင်္ဂ၌ သူသည် တယောက်တည်း မွေးဖွားလာပြီး တစ်ယောက်တည်း သေရမည်ဖြစ်သော၊ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပေးစေချင်၏။
ဒါနှင့် အိမ်နီးနားချင်း မစ္စမာတင်နှင့် နန္ဒာကို မိတ်ဆက်ပေးရ၏။ မစ္စမာတင်လို နန္ဒာ တွေးခေါ်တတ်လျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲ။
သို့သော် နန္ဒာသည် ကိုကို ‘ မျက်နှာ ’ များတတ်ဟန်ကို ရိပ်မိသိရှိလာရပြီးကတည်းက ခွင့်မလွှတ်နိုင်တော့။ ကိုကို ဆေးရုံမှ အိမ်သို့ အပြေးပြန်လာလည်း ရှိချင်မှ ရှိမည်။ သုံးနှစ်ကျော် သားကလေးကို လက်တွဲကာ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်နေသည်တဲ့။ တစ်ညနေလုံး တရပ်ပဲလဂါးပန်းခြံမှာ ထိုင်နေသည်တဲ့။ ရေပန်းနှင့် မီးရောင်ကို ကြည့်နေသည်တဲ့။ သားလေး အအေးမိမှာ ကိုကိုစိုးလှ၏။ သားလေး အိပ်ပျော်နေလျှင် တက္ကစီဖြင့်ပြန်လာသည်ကို လှမ်းယူပွေ့ချီရ၏။ နန္ဒာစိတ်ပင်ပန်းလှသည်ကိုလည်း သနား၏။ သဘောထားမမှန်သည်မို့ ကိုကို့တာဝန် မဟုတ်ဘူးထင်၏။
မြနန္ဒာသည် ကိုကို့ကို စေ့စေ့ငှငှ မကြည့်တော့ပြန်ချေ။ နန္ဒာ ငေးမောနေသည့် အခါမျိုးမှာသာ ညိုညိုအေးအေး မျက်လုံးများကို တိတ်တခိုး မြင်ရ၏။ သို့မဟုတ် မျက်လွှာချသဖြင့် မို့တင်း တုန်ရီသော မျက်ခွံပြာလဲ့ကိုသာ မြင်ရ၏။ ဆုံးရှုံးသွားရသော သူကလေးက ကိုကို့အပေါ် ရင်းနှီး ပိုင်စိုးချင်သော အမူအရာလေးကိုလည်း နှမြော တသ နေရ၏။
ပြီးတော့ပြောရက်သည်မှာ “ ကိုကိုဟာ မိန်းမလိုက်စားသူသာ ဖြစ်ပါတယ်နော်” တဲ့။ “မုဒိမ်းကောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်” တဲ့။ ရုပ်ရည်နှင့်မလိုက်အောင် ရက်စက်ဆိုးရွားလှသည့် မြနန္ဒာ။ ကိုယ့်မယားကိုယ် ချစ်ချင်တာတောင် မုဒိမ်းကောင် ဖြစ်ရမည်တဲ့။ ကိုကိုက ရန်ဖြစ်ချင်၏။ မြနန္ဒာက တခွန်းကောင်း အနိုင်ယူ ပြောကာ လွတ်ကင်းဝေးလံရာမှာ တိတ်ဆိတ်စွာ နေတတ်သည်။ ပြသနာကို သည်လိုရင်မဆိုင်ဝံ့လို့ ဖြစ်မည်လား။ ပြေးရှောင်လို့ လွယ်မည်လား။ ကိုကို ရှင်းလင်းပြောပြချင်လှ၏။ အချစ်ဆိုတာ အိမ်ထောင်မှာ၊ လင်မယားမှာ သားသမီးမှာသာ ရှိသည် ဆိုတာ။ အဲဒါရဲ့ အပြင်ပက ကိစ္စတွေမှန်သမျှဟာ တံတားအောက်၌ ဖြတ်စီးသွားသော ရေပမာသာ ဖြစ်သည်ဆိုတာ။ တစ်နေ့တော့ မြနန္ဒာ စိတ်ထားမှန်လာလိမ့်မည်။ နားလည်လာလိမ့်မည်။ စင်စစ်တော့လည်း ခွင့်လွှတ်စရာမရှိတာက်ု သိလာလိမ့်မည်။
“ နန္ဒာ နည်းနည်း ပိန်သွားပါလား” ဟု တယုတယ မေးရ၏။
“ထင်လို့ပါ” ဟု မျက်လွှာချမြဲ ဖြေတတ်သည်။
“ကိုကို ဆေးထိုးပေးဦးမယ်လေ၊ စားမကောင်းဘူးလား၊ အိပ်မက်တွေ မက်သေးလား၊ နန္ဒာက သိပ်အစွဲ အလန်းကြီးတာကိုး”
နန္ဒာ့မျက်တောင်များ၌ တွဲဥလာသော မျက်ရည်များကို လက်ကိုင်ပုဝါဖြင့် အသာသုတ်ရင်း ‘ဒါလင်က ကလေးလိုပါပဲလား’ ဟု သနားရပြန်၏။ ပြီးတော့ ညစဉ်မှန်မှန်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ ပြန်လာသည့်အခါ နန္ဒာ မရှိလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်၏။ နန္ဒာ စည်သွတ်ဘူးများနှင့်သာ ပြီးစလွယ် စားနေသည်ကို သိပြီး လမ်းထိပ်မှ ကြက်ကြော်များ၊ ငါးကြော်နှင့် အာလူးကြော်များ ၀ယ်လာဖို့ သတိရတတ်ပြန်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ နန္ဒာ အပြင်သို့ မထွက်မီ မှီအောင်ပြန်လာပြီး ကလေးနှင့် မီးရထားတွဲဆင်ကာ ကစားနေကြလျှင်တော့ နန္ဒာသည် အိပ်ခန်းတွင်းမှာသာ ၀င်နေကာ ထိုညနေအဖို့ လမ်းမထွက်တော့ချေ။ သားနှင့် အိမ်ဆောက်တမ်းကစားရ၏။ စက်ဘီး ၀က်အူချောင်သည်ကို ကြပ်ပေးရ၏။ နန္ဒာ့မျက်နှာ ကြည်လင်လာတတ်၏။
သည်လိုဖြင့် လန်ဒန်၌ စာသင်အလုပ်ဝင်လုပ်သည့်စခန်း ပြီးဆုံးသွားသော် ပါပါက ပါရီသို့ ပြောင်း၍ ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ် ကုသခြင်းကို သင်စေချင်ပြန်သည်။ သမီးမြနန္ဒာလည်း ပြင်သစ်စကားကို ပြင်သစ်သံဖြင့် ပြောနိုင်အောင်ထင်ပါရဲ့။
‘နန္ဒာ လန်ဒန်မှာ နေခဲ့နိုင်သားပဲ’ လို့ ကိုကို့နှမက အေးစက်စက်ပြောလေ၏။
‘ဒါပေမဲ့ ကိုကိုက မထားခဲ့နိုင်ဘူး ဒါလင်’ ရဲ့လို့ဆိုတော့ ပျော့ပျောင်းလာမည် ထင်သလား။ သူပြောလိုရာ ကိုသာ ပြောတတ်သည်။
‘တစ်လ ပေါင် ၄၀ လောက်နဲ့ နေလို့ရပါတယ်။ နန္ဒာ အရောင်းစာရေးမ လုပ်မှာပါ။ စာကြည့်တိုက်မှုး သင်တန်းပဲ တက်ရင်ကောင်းမလား။ လက်နှိပ်စက် လက်ရေးတို သင်ရင်ကောင်းမလား’
‘ကိုကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့သာ ယူလိုက်ပါတော့’ တဲ့။
ဒါကို သူမသိဘူးလား။ ကိုကို နန္ဒာ့ကို ချစ်တာအပြင် ဘာတွေသတိရစရာ လိုသေးလို့လဲ။ နန္ဒာဟာ ဆန်းပြားသူ တစ်ယောက်လားမသိ။ သူဖတ်သော စာများကလည်း ကိုကိုနှင့် မအပ်စပ်သော စာများပင်။ ကိုကို မတတ်သော ပြင်သစ်စာအုပ်၊ ဂျာမန် စာအုပ်တွေကလည်း ဘီရိုဖြင့်အပြည့်။ ကိုကို နားထောင်ဖို့ ပျင်းရိသော ရှေးသီချင်းကြီးများကို တီးမှုတ်နားထောင် တတ်ပြန်သည်။ နန္ဒာ ကြိုက်သော ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်ကအစ လေးလေးပင်ပင်ကြီးများဖြစ်သည်လို့ ဆိုရမလား။ လူ့ဘ၀ကို အလေးအနက် ထားလွန်းသည်။ အစွဲအလန်း ပြင်းထန်လွန်းသည်။
တကယ်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခွဲစိတ်ခုံပေါ်၌သာ ရှိသည်ဆိုတာကို နန္ဒာသိမည်မဟုတ်။ ခွဲစိတ်ခန်းတွင်းသို့ ကိုယ်လုံးတီးဝင်ရောက်လာကြကာ အကြိုမေ့ဆေး၊ ထုံဆေးတို့ဖြင့် သတိလစ်လျက် ဘာမျှအဖိုးမတန်သော မိမွေးတိုင်း ကိုယ်စိတ်တို့ ဖြင့် အဖြူဝတ်ပိုင်း ခဏဖုံးလွှမ်း ၀င်ရောက်လာကြသော သေလွယ်သလောက် သေခဲ၍ ရှင်လွယ်သလောက် ရှင်ခဲသော၊ သို့မဟုတ် သေသည် ရှင်သည် ဟူသော ကိစ္စသည် ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေသော လူသတ္တ၀ါအဖို့ တကယ်အရေးကြတော့ ပီယာနိုနှင့် ဓာတ်ပြားတီးလုံးသည် ရိုမီယိုနှင့် ဂျူလီယက်ပြဇာတ်သည် ရယ်စရာ အပရိက ပစ္စည်းမျှသာဆိုတာ မြနန္ဒာရိပ်မိမည် မဟုတ်။ ရိပ်မိအောင်လည်း မကြံရွယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲ၌ ထည့်ထားမှ တန်ဖိုးအာနိသင် တည်မြဲသော ၀ိုင်ယိုပင်ပေါ် ပင်နီစလင်အဖိုးတန် တမျိုးကို ဆေးရုံက ပစ္စည်းမို့ ရွံသည်ဆိုပြီး ဘီရိုထဲ ထည့်ထားသတဲ့။ အားလုံးပစ်ရကုန်သည်။ ဆေးရုံကိုလည်း ဘယ်တော့မျှ မလာချင် မ၀င်ချင်။ ဆေးရုံတွင်းက လေကို ရှုရတာ ရွံသည်တဲ့။ ဆေးရုံက ပြန်လာသော ကိုကို့အနံ့ကအစ နံသည်----တဲ့။
‘ပါရီကို နန္ဒာနဲ့ သားမပါပဲ ကိုကို ဘယ့်နှယ်လုပ် သွားမှာလဲ။ ကိုကို သေရင်တော့ ထားခဲ့ရမှာပေါ့’ ဟု ပြောမိ၏။ ပြီးတော့ သနားကြင်နာခြင်းများဖြင့် ‘ကိုကို မှားတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုကပဲ အပြစ်တင်ခံပါ့မယ်။ ဒါလင် စိတ်မချမ်းမသာ မဖြစ်စေရပါဘူး’ ။ သို့ပေမည့် စိတ်တွင်းက ဆက်ပြောသည်မှာတော့ ‘နန္ဒာ ဘာမှ မရိပ်မိစေရပါဘူး၊ မသိစေရပါဘူး’
ကိုကိ်ု နှမမြနန္ဒာသည် ကိုကိုသိသည်ပေါ့။ အင်မတန် အတွေ့အကြုံနည်းပါး၍ စာအုပ်က ဆိုသမျှ အဟုတ်မှတ်သည့် မြနန္ဒာသည် ဖြုန်းခနဲထလာပြီး ကိုကို့ရင်ခွင်သို့ တိုးဝင်သည်။ နန္ဒာရဲ့ မွှေးကြိုင်ညိုမောင်း ဆံပင်များထဲ မျက်နှာအပ်ရင်း၊ ပန်းနုရောင်ဆိုးပြီး ပြောင်လက်ချောမွတ်သည့် လက်ချောင်းများကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း၊ ရှားနဲလ် ရေမွှေးသင်းမြသည့် နားရွက် နားထင်စ ကလေးများကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ပွတ်တိုက်ရင်း တစ်လ ပေါင် ၄၀ ဖြင့် နေမည်ဆိုတာ သတိရကာ ပြုံးရယ်ပြီး နမ်းရပြန်၏။ ‘နန္ဒာ ရှန်ပိန်လိုသေးလား’ လို့ သူက နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် မေးလိုက်လျှင်တော့ ကိုကို့နှမသည် မျက်တောင်များ ကော့ဖြူးကာ မျက်လုံးအေးအေးညို့ညို့ဖြင့် ပြူးကျယ်ကြည့်ပြီး အားနာဟန်နှင့် ‘သူကလဲ’ ဟု ဆိုလေသည်။
ပြင်သစ်ပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြသည့်အခါ ဟန်းနီးမွန်းထွက်သလို အောက်မေ့ရသည်။ ကိုကိုသည် သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင် သူမှားသည်လို့ တော့ထင်သည်မဟုတ်။ မြနန္ဒာ စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ သူတတ်နိုင်သမျှ ပြုမည်လို့ ရည်စူး၏။ ထို့ကြောင့် ညနေတိုင်း အိမ်ပြန်လာသည်။ ညတာဝန် ကျပြီးနောက် တစ်နေ့အားသော နေ့များကတော့ ကိုကို၏ ကိုယ်ပိုင်နေ့များ ဖြစ်သည်။ မြနန္ဒာကို ဘာမျှပြောပြနေစရာ မလိုပဲ သူပျော်ရွှင်သလို နေနိုင်သော နေ့များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှုတ်သီးကလေး တစူစူဖြင့် ညုတုတုပြောတတ်သော ပါရီသူကလေးများနှင့် ချစ်ချင်သည့်အခါ ချစ်ခွင့်ကို ရသည်။
တစ်ညနေမှာ လုဗ်ပြတိုက်ဘက်ကို သတိမထားမိပဲ ရောက်မိ၏။ သည်လမ်းတလျှောက်မှာ မြနန္ဒာ သွားတတ်တာကို မေ့သွားသည်။ နန္ဒာက သားကို ပန်းချီဆရာ ဖြစ်စေချင်သည်မို့ ထင်ရဲ့ ပန်းချီပြတိုက်သို့ မကြာခဏ သွားပြတတ်၏။ ကိုကိုက ဆေးရုံဧည့်ခံရေးဘက်မှ ပြင်သစ်သူတစ်ယောက်နှင့် ထွက်လာမိတုန်းကပေါ့။ စောစော လှမ်းလှမ်းကပင် နန္ဒာ့ကို သူမြင်လိုက်၏။ နန္ဒာ လမ်းမအလယ်မှာ က္တွနြေ္ဒမရ ဖြစ်မည်ကို သူစိုးလှ၏။ ရှက်စရာတွေဖြစ်မှာကို စိုးလှ၏။ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ကြတော့မည်ကို ရှောင်ဖယ်လို့လည်းမရ။ ရက်စက်ချင်လို့တော့ မဟုတ်။ နန္ဒာမျက်နှာမှ လွှဲ၍ ရအောင် လုပ်မိလုပ်ရာ ပွေ့ဖက်ထားသည့် ပြင်သစ်သူကိုလည်း မျက်နှာချင်း အပ်မတတ် ငုံ့ကြည့်တာ ရယ်မော စကားပြောနေလိုက်၏။ နန္ဒာ သူ့ကို မြင်မှာပါပဲ။ လွန်သွားမှ ပြန်လှည့်ကြည့်သော် နန္ဒာသည် သားငယ်ကို လက်ဆွဲ၍ လမ်းတလျှောက်လုံး ပြေးသွားသည်ကို မြင်လိုက်၏။ နန္ဒာရဲ့ ဆံပင်သည် လျောပြေ၍ လွင့်ပါး၏။ နန္ဒာ့ ခေါင်းစီးပုဝါ စိမ်းပြာနုကလေးသည် လွင့်ပါးကာ လမ်းမ၌ လျောတိုက် ပြေးနေသေး၏။ နှုတ်ခမ်းမွေးဖြူဖြူနှင့် အဖိုးကြီးတစ်ယောက်က ကောက်ပြီး ဘယ်သူ့ပေးရမည် မသိဖြစ်ကာ ပိုင်ရှင်ကို ဟိုရှာသည်ရှာ ရှာနေသည်။ ကိုကို သွားတောင်းလိုက်မည် စိတ်ကူး၏။ သို့သော် လမ်းမတလျှောက်၌ ပြေးထွက်သွားသော မြနန္ဒာဟာ ကိုကို့မိန်းမပါဆိုတာ ယုံမည်လား။ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲက ပြင်သစ်သူကလေးကိုလည်း နားမလည်သလို ကြည့်ဦးမည်။ လောလောဆယ်မှာတော့ အခြေအနေသည် ရယ်စရာကြီးပင်။ ခုလမ်းပေါ်မှာတော့ နန္ဒာနှင့် ကိုကိုသည် တစိမ်းပြင်ပြင်မျှပင်။ သားကလေးကကော ဖေ့ဖေ့ မြင်သည်လား။
သားကလေးကပါ မြင်သည်ဆိုလျှင် တစ်သက်လုံး မမေ့ပျောက်နိုင်သော ပုံလွှာအဖြစ် သား၏ကလေး ဘ၀မှာ စွန်းထင်း နေရစ်မည်လား။ သားဟာ ဖေဖေ့ကို ကြည်ညိုပါတော့မည်လား။ နန္ဒာကကော သားနှင့် ဖအေကို ရန်လိုစေမည်လား။
ကိုကိုသည် လမ်းမလယ်၌ရပ်ကာ ကျပ်ကျပ်ပွေ့ဖက်ထားသော လက်များကို လွှတ်လိုက်ရာ လက်မောင်းများကြားက မိန်းကလေးပင် ယိမ်းယိုင်သွားပြီး ဒေါကလေးဖြင့် ‘ဘာဖြစ်တာလဲ’ မေးသည်ကို ခံရ၏။ ကိုကိုသည် ရင်တွင်း၌ နာကျင်လာပြီး စောစောက ပျော်ရွှင်နေတာတွေ ပျောက်သွားပြီး ကလေးမကိုသာ တောင်းပန်ရ၏။ ကလေးမ ဘာပြန်ပြောသည်၊ ရန်တွေ့သည်ကို သူမကြားတော့။ နားမလည်တော့။ မြနန္ဒာကို သူနာကျည်းစေခဲ့သည် ဆိုတာသာ ၀မ်းနည်းနေပြီး၊ လမ်းမပေါ်တွင် ကလေးမကို ထားခဲ့ပြီး မြနန္ဒာ ပြေးသွားရာသို့ လိုက်ခဲ့၏။ သို့သော် မီအောင်လည်း သူပြေးလိုက်သည်မဟုတ်။ နန္ဒာ အိမ်ပြန်မှာပဲ ထင်ပါရဲ့။ လမ်းချိုးအကွေ့၌ မြနန္ဒာတို့သားအမိ ကွယ်ပျောက်သွားသည်ကို ခဏကြည့်နေပြီး အိမ်ဘက်သို့ မလိုက်တော့ဘဲ သန်းခေါင်ကျော်အထိ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်နေခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဆေးရုံကို ပြန်တာပဲ ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံသည်သာ သူ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကို ပေးနိုင်သည်။ အလုပ်ခွင်၌ တစ်ဘ၀လုံး နစ်နေရတာသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
မြနန္ဒာနှင့် ဘာလို့ တွေ့ရတာပါလိမ့်။ မြနန္ဒာသာ လောကမှာ မမွေးဖွားခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယူဖြစ်မည်မဟုတ်။ အလုပ်နှင့် ဆေးစာအုပ်သာ သူ့အဖို့ အရေးကြီးကာ အားလပ်သော အချိန်များ၌ အဆင်သင့်သလို အတွယ်အငြိမရှိ အနားယူနိုင်လိမ့်မည်။
ကိုကိုဟာ သားနှင့် မယားနှင့် နေဖို့ကောင်းသူမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အနှောင်အဖွဲ့နဲ့ သင့်မြတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး
တစ်ဖန် စဉ်းစားပြန်တော့ ဘယ်ယောက်ျားဟာကော ထိုအနှောင်အဖွဲ့ကို ၀မ်းသာအားရ သိသိမှတ်မှတ် လက်ခံမှာလဲ။
သူသည် ဆေးရုံမှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် မြနန္ဒာသို့ ဆက်လိုက်၏။ ‘ကိုကို ဆေးရုံမှာ သုံးလေးရက် ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ညပါ မပြန်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါလင်နေ၀ံ့တယ် မဟုတ်လား။ သားကိုလဲ ပြောလိုက်ပါဦး ဖေဖေက သတိရနေမှာပါလို့။ ဖေဖေက အများကြီး နမ်းလိုက်တယ်လို့’
‘ဟုတ်ကဲ့ကိုကို’ ဟု အေားဆေးတိုးတိတ်စွာ ဖြေသံကို ကြားရ၏။
မြနန္ဒာသည် ဘာမျှပြန်မပြောဘဲ တယ်လီဖုန်းကို ချလိုက်သည်။ ပါရီ၌နေကြသော နှစ်နှစ်လောက်မှာ မြနန္ဒာသည် အရူးပမာ ဖြစ်နေ၏။ မလိုပါဘဲဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲကို ရှာသော မြနန္ဒာလေး။ အိပ်ရာထဲ၌ နန္ဒာကို ချစ်သနားခြင်းဖြင့် မျက်နှာချင်းအပ်နေဆဲ ဖြုန်းခနဲ မပြောမဆို ထထိုင်၍ ကိုကို့ပါးကို ဖြန်းခနဲ ရိုက်တတ်သည်။ ရုတ်တရက်မို့ တွန်းလိုက်မိလျှင် ရယ်မောသည့်အခါ ရယ်မော၍ ငိုယိုသည့်အခါ ငိုယိုနေ၏။ သိပ်မွေ့အေးဆေးသော န ဂိုအကျင့်ကို သိပ်မမြင်တော့။ ရေပြင်ဂယက်ရိုက်သလို မနာလိုစိတ်တွေ၊ နာကျည်းစိတ်တွေ နန္ဒာ့ဘ၀ကို လွှမ်းမိုးနေပြန်၏။ နန္ဒာမသိဘူးလား။ သည်လိုဖြစ်ဖို့ မလိုဘူးဆိုတာ ကိုကို့အဖို့ နန္ဒာသာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ။ တစ်ခါတရံတော့လည်း နန္ဒာသည် အလွန်တိတ်ဆိတ်သော ရန်ဖြစ်ခြင်းမျိုးနှင့် နေပြန်၏။ ကိုကို၏ မမြင်ကွယ်ရာ၌ ရှောင်နေပြန်၏။ နန္ဒာ့အသံကို ကြားချင်လို့မှ မကြားရပြန်ချေ။ ခြေသံတောင်မမြည်အောင် လျှောက်လေသလားမသိ။ သားကိုပင် ကိုကိုရှိလျှင် အရောဝင်ခြင်းမပြု။ ကိုကိုက သည်လိုအချိန်မျိုးမှာ ဆေးစာအုပ်များနှင့်သာ နေပြန်လျှင် နန္ဒာသည် ဖြုန်းခနဲ ထလာတတ်ပြီး ကိုကို့ရဲ့ ဆံပင်သန်မာ ထူထဲသော ခေါင်းကို ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ယူကာ ‘ကိုကို့ကို နန္ဒာ ဘယ်လောက်ချစ်သလဲ’ လို့ သူ့ဘာသာ မေးလေသလား ဖြေလေသလားမသိ ထူးဆန်သော စကားကိုဆိုတတ်သည်။
‘နန္ဒာရူးသွားရင် ဒီတိုင်းတော့ ကြည့်မနေနဲ့နော်။ နန္ဒာရှက်တယ်။ မော်ဖီးယားအများကြီးထိုးပြီး အိပ်ခိုင်းလိုက်ပါ’ တဲ့။ ရယ်ဟဟဖြင့် ပြောသေး၏။
ခဏကြာလျှင် သတိရလာပြန်ပြီး ‘ခု--- မရူးခင်ကော မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလား’
ပြီးတော့ နေ့စဉ် သတင်းစာထဲမှာ အက်ဖယ်မျှော်စင်ပေါ်က ခုန်ချသေသူ။ လျှပ်စစ်ရထားပေါ် ခုန်လွှဲပစ်ချပြီး သေသူတို့ သတင်းကို ထပ်တလဲလဲ ဖတ်တတ်၏။ ‘ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်ကြီးနော် ကိုကို။ ရှက်စရာကြီး။ လူတွေကြည့်မှာ’ လို့ပြောတတ်၏။ ‘မိုက်လိုက်တာ။ အိပ်ဆေးသောက်ပါလား’ လို့ အကြံပေးချင်ပြန်၏။
ကိုကိုသည် အိပ်ဆေးပုလင်းများ ကုန်သလောက် ရှိနေသည်ကို အံ့သြစွာ တွေ့ရ၏။ ‘နန္ဒာ သောက်ပစ်နေတာလား’ လျှင် ‘အိပ်လို့မှမပျော်ဘဲ’ ဟု ဖြေ၏။ အိပ်ဆေးပုလင်းများ သူသိမ်းဆည်းလျှင် နန္ဒာက ခေါင်းကို နောက်ပစ်၍ ခပ်တိုးတိုးပင် ရယ်မောလိုက်ကာ ‘သားလေး ငယ်သေးတယ်ကိုကိုရဲ့’ ဟု ပြောတတ်လေ၏။
ကိုကိုရဲ့ ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ် ကုသခြင်းပညာ ပထမပိုင်း ပြီဆုံးသွားပြီး၊ နောက်ထပ် တစ်နှစ်မျှ ဆက်သင်ချင်သေး၏။ သို့သော် ပါရီ၌ ဆက်မနေချင်တော့။ မြနန္ဒာသည် အစွဲအလန်းကြီးသူ ဖြစ်သည်။ လုဗ်ပြတိုက်သို့ လုံးဝမသွားတော့ချေ။ ‘အဲဒီလမ်းကို မလျှောက်ချင်လို့’ ဟု ဖြေတတ်လေသည်။ ပါရီမှာ သူနေချင်တော့သည်လည်းမဟုတ်။ ပါရီကို နန္ဒာမုန်းပြီတဲ့။ မိန်းမပေါသော၊ အချစ်ပေါသောမြို့ဟု ခေါ်သေး၏။
‘နန္ဒာကော ဆံပင်တွေ ဖြတ်ပစ်ပြီး ဂါဝန်တိုလေးဝတ်ပြီး စိမ်းမြစ်ကမ်းပါး လျှောက်ကြည့်ချင်လိုက်တာ။ အဲဒီလိုဆို အချစ်များစွာနဲ့ တွေ့မယ်လားကိုကို။ ဒါမှမဟုတ် ကိုကို့အချစ်ကို ရမယ်လား’ လို့ ရယ်မောနောက်ပြောင်လိုက်သေး၏။ သို့သော် နှုတ်ခမ်းထောင့်များ မဲ့ကာ တုန်ရီနေသည်။
‘မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့ နန္ဒာရယ်’ လို့ ဆိုလျှင်
‘နန္ဒာ့ကို မိုက်ချင်တယ်ပဲ ပြောကြတာပဲနော်။ နန္ဒာကဖြင့် ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့။ သူများလုပ်သမျှသာ နန္ဒာ ခံရပြီးတော့’ ဟု ကလေးလို ငိုတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပလပ်စတစ်ပညာကို ပထမပိုင်းနှင့်ပင် ကျေနပ်ရပြီး သူတို့ ဂျာမဏီသို့ ပြောင်းကြ၏။ ကလေးသူငယ် ခွဲစိတ်မှုအတွက် နှစ်နှစ် သင်ချင်သေး၏။
သဘောတူမြဲ။ ငွေပို့မြဲ ပါပါတို့က လက်ဝတ်ရတနာများပါ ထုခွဲရောင်းချစားဖို့ ပို့ပြန်၏။ မြနန္ဒာနှင့် သူ့မိဘတို့ စာရှည်များ အပြန်အလှန် ရေးဟန်လည်းရှိသည်။ ကိုကို့ အကြောင်းကို တိုင်လေသလားမသိ။ သူ့မိဘကတော့ နားလည်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် ပါပါက နားလည်လိမ့်မည်။ လူ့ဘ၀၌ တစ်ခါမျှသာ ငယ်ရွယ်နုပျိုရသည်ဆိုတာ။
ဂျာမဏီ၌ နန္ဒာ လူ့ဘ၀မှာ အေးချမ်းစွာ နေတတ်လာသည်ကို နှစ်လိုဖွယ် တွေ့ရသည်။
မနက်မိုးလင်းလျှင် ကိုကို ဆေးရုံသွားသည်ကို အပေါက်ဝအထိ လိုက်ပို့၏။ သားကျောင်းသွားချိန်မှာ ကျောင်းအထိ လိုက်ပို့ပြန်၏။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်းကျန်လျှင် ပီယာနို တီး၍နေ၏။ ဂရင်းပီယာနိုကြီးတစ်လုံး ၀ယ်ထား၏။ သီချင်းကြီးများစွာ တက်၏။ ရှေးသီချင်း ဓာတ်ပြားများစွာ ၀ယ်၏။
‘မြန်မာ သီချင်းတွေကို သင်္ကေတနဲ့ ရေးထားလို့ ၀ယ်လာတယ်။ ကြည့်ပါဦး ကိုကိုရဲ့’ ဟု လာပြတတ်၏။ ပြီးတော့ စမ်းသပ်တီးခတ်နေတတ်သည်။
မြန်မာကဗျာကို ဖတ်လို့တော့ မငိုတော့ပြီ။ ကြိုးကြားရောက်လာသော မြန်မာမဂ္ဂဇင်းများဆို ဖတ်၍ ကြိုက်တတ်သောကဗျာကို ပီယာနို၌ အသံသွင်းသည်တဲ့။
မသာအိပ်မက် မက်တတ်သေးသည်။ ။
‘ဘယ်လိုကဗျာလဲ သီချင်းလဲ ဒါလင်ရဲ့’ လို့ မျက်မှောင် ကြုတ်လို့ မေးလျှင်တော့ မြနန္ဒာက ‘အိပ်မက်ပဲ ကိုကိုရဲ့။ မမက်ရဘူးလားလို့ ပြန်ပြောတတ်သည်။ ‘ အိပ်မက်ပဲ’ လို့ ‘မမက်ဘူးလား’ လို့ မကျေမနပ်ဖြင့် ပြောပြန်သည်။ ကိုကိုက ရယ်မော၍----
ဟုတ်သည်။ မက်ရပါသည် နန္ဒာရယ်။ အိပ်မက် မက်တတ်သူသာ မက်ရသည်ပဲ။ ဒါဟာ နန္ဒာရဲ့ အမှားတော့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် နန္ဒာမပြုလုပ်ခဲ့ရသော မွေးကတည်းက ပါသော အမှားဖြစ်သည်။ ထိုအမှားကြောင့် စိတ်သိမ်မွေ့ရသည်။ အထီးတည်းနိုင်ရသည်။ သူတကာနှင့် ရောလို့ မရသည်။ တယောက်တည်း ဖဲခွာထွက်လာတတ်စေသည်။ ဝေဒနာခံစားရာ၌ ပြင်းပြစေသည်။ လောက၌ အကောင်းဆုံးချည်း၊ အလှကိုချည်းမြင်စေ၊ မျှော်မှန်းစေပြီး အကောင်းနှင့်အလှဆိုတာချည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံမှားစေသေး၏။ စိက်ကူးယဉ်စေ၏။ စိတ်ဒဏ်ရာ ရလွယ်စေ၏။ မေ့ပျောက်ခဲစေ၏။
ပြီးတော့ ကိုကို့ နှမ မြနန္ဒာအဖို့ ပိုဆိုးသည်မှာ ကိုယ့် ကိုယ် ကို ဘာလိုချင်မှန်း ဘ၀၌ ဘယ်လိုနေရမှန်း မသိခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
နန္ဒာကို မရယ်မောလိုတော့။ နန္ဒာသာ ပါပါ့ သမီး မဖြစ်ခဲ့လျှင် တစ်လလျှင် ပေါင် ၄၀ ဖြင့် နေကာ လမ်းမပေါ်တွင် ၁၀ ပေါင်မျှဖြင့် ချရောင်းသော ပီယာနိုစုတ်ကလေးကို တီးပြီး ဘ၀တလျှောက်လုံး ကျေနပ်နေနိုင်မည် ထင်သည်။ ဥရောပတစ်ဝှမ်းမှာ ကျော်ကြားသော ယခုတီးသည့် ပွဲဝင်ဂရင်းပီယာနိုမျိုးကို မင်းပရိသတ်အလယ်မှာ တီးသော ပညာသည်အဖြစ်သို့ ရောက်ချင်လည်းရောက်မည်။ ယခုတော့ အိမ်နီးချင်းများကို အားနာ၍ အခန်းကို အသံလုံအောင် ပြုပြင်ပြီး တရေးနိုးတိတ်ဆိတ်ချိန်မှာ ထပြီး အသာ တို့ခေါက်ရ၏။ မကျေနပ်ပြန်လျှင် အခန်းကျဉ်း၌ ခေါက်တုံ့လျှောက်ကာ ဂျာမန်စာအုပ်များကို ဖတ်နေပြန်သည်။
နန္ဒာကို ကိုကို နားလည်ပါသည်။
ကိုကို့ ကိုလည်း နန္ဒာ ခေါင်းမာမာဖြင့်ပင် အနည်းငယ် နားလည်ရသည်။ အောက်တိုဘာ မြူးနစ်ပွဲတော်၌ တိုးကြိတ်ပျော်ရွှင်ကြသော လူစည်ကားရာသို့ တစ်ခါမျှသာ လိုက်လာပြီး အိမ်မှာ ကလေးနှင့် နေရစ်သည်။ သည်ပွဲတော်မှာ မြနန္ဒာလို အလှကလေး အဖိုးတန်ကလေး ကိုကို့ နှမကလေး ပါဝင်သင့်သည် မဟုတ်။ နန္ဒာကို လူတိုးမှာလည်း ကိုကို စိုးလှ၏။
ကိုကိုကတော့ အိပ်မက် မမက်တတ်သူ။ ပန်းပွင့်ကို မြင်လျှင် အလှကြည့်မည့်အစား ခူးဆွတ်မွှေးနမ်းလိုသူမို့ ပန်းပွင့်တွေသာမက တေးသံ စကားသံ လူသံ လူနံ့ ရောထွေး မူးရီသော ပွဲတော်၌ လုံးထွေးပါဝင်ရသည်။ နန္ဒာက ကိုကို့ ကို အပြစ်တင်ဦးမည်လား။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြင့်သာ ဆေးရုံမှ အ၀တ်မကပ်သော လူ့ဘ၀ ဖုံးအုပ် ကွယ်ဝှက်ခြင်းမရှိသော အကြောအခြင် အသွေးအသားတို့သာ မြင်ရသည့် ဘ၀၌သာ နစ်မူး၍ ရူးစေချင်သည်လား။
ထို ပွဲတော်မှာ အန်းနာနှင့် ချစ်ရသည်။
နဂိုကတော့ ကိုယ့် ဆေးရုံက ခင်မင်နေသည့် သူနာပြုမလေးပါပဲ။ စင်စစ်တော့ နဂိုက တော်တော် ခင်ခဲ့သည်အမှန်။ ခွဲစိတ်ခန်း၌ ကူရသော သူနာပြုမကလေး ဖြစ်သည်။ သူနာပြုပညာကို ၇ နှစ်ကြာမျှ သင်ယူပြီးမို့ ခွဲစိတ်ခုံပေါ်၌ အလုပ်များစဉ် ကျွမ်းကျင်သော စိတ်ချရသော အားကိုးရသော အဖော် ဖြစ်သည်။ သွေးကြောများကို ကျွမ်းကျင်လှသော လက်များဖြင့် ကြိုးမမြင်ရအောင် အလွန် လျင်မြန်စွာချည်စဉ် သွက်လက်စွာ အမီ ကူညီတတ်၏။ တစ်ခွန်း မပြောရ။ လိုသမျှ ကိရိယာကို အသင့် လက်ထဲ ထည့်တက်၏။ ခွဲစိတ်နေစဉ် လူနာ၏သွေး ပြာလာလျှင် မေ့ဆေးဆရာကို မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်၍ သတိပေးတတ်သည်။ အန်းနာ အကူအညီဖြင့် ခွဲစိတ်ရသည်ကို သူ စိတ်တိုင်းအကျဆုံး။
ခွဲစိတ်ခန်းမှ ထွက်လာလျှင် မောတာချင်း အတူတူ အန်းနာက ကော်ဖီကျကျ တစ်အိုး လာချပြန်၏။ သူ ကြိုက်တတ်သည့် စားစရာ မုန့်များကို မရအရ ရှာဖွေပေးတတ်၏။ ပန်းသီးများ ခွဲစိတ်ပေးတတ်၏။
အမောပြောလျှင် ခွဲစိတ်ခန်းက နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများအကြောင်း ပူစရာမရှိ။ ရေးမှတ်စရာများ၊ အိုင်အော့ပစ်လုပ်ရသည့် အသွေး၊ အသား၊ အရိုး၊ အကြိတ် စစ်ဆေးခန်းသို့ ပို့စရာများ၊ လူနာ သွေးအား၊ နှလုံး အခြေအနေ သတိရ မရ အသေးအဖွဲ အားလုံး စစ်ဆေးပြီးပြီ။
ခွဲစိတ်ခဲ့ရာ၌ တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အန်းနာသည် ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး အလုပ် လုပ်ဖော်ဖြစ်သည်။
အန်းနာသည် မြနန္ဒာလို မလှပ သော်လည်း အထက်တန်းစားအမူအလေ့ မရှိသော်လည်း စကားပြောလို့ လွယ်သော မိန်းကလေးဖြစ်သည် ဆိုတာ အောက်တိုဘာပွဲတော်မှာ သိရ၏။
မမျှော်လင့်ဘဲ အန်းနာကို ညစာစားဘို့ ခေါ်မိလျက်သား ရှိ၏။ ခါတိုင်း တောင့်တင်းဖြူဖွေးထူထဲသော ၀တ်စုံဖြင့် စင်ကြယ်သော လက်ချောင်းများ၊ စင်ကြယ်သော မျက်နှာဖြင့် တွေ့ရမြဲ အန်းနာကို ခရမ်းနုရောင် ဂါဝန်ဖြင့် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး ခြယ်သသော ခေါင်းစွပ်ဖုံးအုပိခြင်း မရှိသဖြင့် ရွှေဝါရောင်ဆံပင်နုများ ဝေဆိုင်းကာဖြင့် မြင်ရတော့ တစ်မျိုး ကျေနပ်မိ၏။
အန်းနာလို မိန်းကလေမျိုးနှင့်ရလျှင် သူ့ဘ၀ တစ်မျိုးအဆင်ပြေမှာ အမှန်ပဲ။ ဘာသာစကားချင်း တူသောလူမျိုးဖြစ်၏။ နန္ဒာကဆိုလျှင် ဆေးစာအုပ်ကအစ နံသည်တဲ့။ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြောတတ်သည်။ ဆေးစာအုပ်အဖုံးများပေါ်က နာမည်တောင် ဖတ်မကြည့်။ ကိုကို ဖတ်လျက်တန်းလန်းမို့ စာအုပ်ကိုဖွင့်လျက်ထားခဲ့လျှင် အပြေးအလွှား လာပိတ်တတ်သည်။ ရုပ်ပုံတွေကို စိတ်ညစ်သည်တဲ့။ မကြည့်ချင်တဲ့။ သားကလေးမြင်မည်စိုးသည်တဲ့။ သားကလေး ဆရာဝန် မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ ကိုကို့ ပညာကို အထင်ကြီးဖို့ လေးစားဖို့ ဆိုသည်ကို စိတ်ကူးထဲ ထည့်မိဟန်မရှိ။ သတိပင်မရ၊ တွေးပင်မတွေးမိ။ တကယ်တော့ ကိုကို၏ ဘ၀၌ အရေးကြီးဆုံးသော ဆေးပညာကိစ္စရပ်များမှာ မြနန္ဒာသည် စိုးစဉ်မျှ မပါဝင်လို့ချေ။
အောက်တိုဘာပွဲတော်မှာ ယောင်္ကျား မိန်းမ အပျို အအို တို့ လမ်းမပေါ်မှာ ရူးမူး ရောထွေးကာ နမ်းကြ ဖက်ကြ သီချင်းဆိုကြ ခုန်ပေါက်ကြတာက စ သည်။ အန်းနာ သာ အန်းနာ မဟုတ်လျှင်တော့ ကိုကို့အဖို့ ဘာမျှ ထူး၍ ပြောစရာ စကား ရှိလာမည်မဟုတ်။ ဘ၀၌ တွေ့ကြုံခဲ့သော နှစ်ဦးသဘောတူ နားလည်သဘောတူခဲ့သော အချစ်များစွာတို့လိုပင် တံတားအောက်၌ ဖြတ်စီးသွားသည့် ရေပမာ ဖြစ်စဉ်တရပ်သာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခုတော့ နဂိုက လေးစားခဲ့သော အထင်ကြီးခဲ့သော ခင်မင်ခဲ့သော အန်းနာမို့ သူသည် ပွဲတော်တချိန်လုံး အသစ်အသစ် မရှာတော့ဘဲ အန်းနာနှင့်သာ သွားလာပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်။ အခန်းတခန်း ငှားပြီး အန်းနာကို ထားလိုက်သည်။ ကိုကို့ သောတွဲမှာ တချောင်း ပိုလာသည်။ အန်းနာ၏အခန်းသည် ကိုကို တခါမျှ မရဖူးသော စိတ်သက်သာ အေးချမ်းသော ကိုကို နားနေရာ အိမ်တအိမ်လည်း ဖြစ်သည်။
အန်းနာသည် ရဲ့ ရင့် သတ္တိ ရှိလှသည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ကိုကိုရဲ့  ကလေးကို သူ မွေးချင်သည်တဲ့။
ထိုကြောင့် အန်းနာသည် ကိုကို့ ကလေးမွေးရလေသည်။ ကိုကို့ ကို သူ မပိုင်ဆိုင်နိုင်သော်လည်း ကိုကို့ကလေးကို သူ ပိုင်ဆိုင်ရလျှင် ကိုကို့ ရဲ့  တစိတ်တဒေသကို ပိုင်ဆိုင်ရတာဘဲလို့ ယူဆဟန်ကို ပြောပြလေတော့ မြနန္ဒာမှာ သည်လို စွန့်စားတတ်သော အချစ်မရှိပါဘူး။ အနာခံသော အချစ် မရှိပါဘူး။ ကိုယ်လိုချင်ရာသာ တောင်းခံတတ်သော မြနန္ဒာပါပဲ ဟု သူတွေးတောလာမိတာ အမှန်ပင်တည်း။ ( မြနန္ဒာကတော့ ကိုကို့ ကို နန္ဒာ့ တစ်ဘ၀လုံး အဆုံးခံပြီး ပေးထားပြီ မဟုတ်လားလို့ ပြောသည်။ သူပေးပုံကတော့ တမျိုးပဲ။ ကိုကို လိုချင်တာကို ပေးသည်လည်းမဟုတ် )
အန်းနာ ကိုကို့ ကလေးကို မွေးခါနီးလောက်မှာ ကိုကို့ ပညာသင်ခြင်း ပြီးဆုံးသွား၏။ ဘွဲ့တခုရပြန်ပြီ။ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ချိန်တန်လေပြီ။ ပါပါ မာမာတို့က ပြန်လာစေချင်ပြီ။ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ပြီး ထိပ်သီးဆရာဝန်ကြီးအဖြစ် ခံယူဦးမည်။ ကိုကို့ နှမ မြနန္ဒာကလည်း ပါရဂူဘွဲ့ ရ ဆရာဝန်ကြီးကတော် မြနန္ဒာဂျော်ပေါ့။ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်၍ တင့်တယ်စွာ နေသောဘ၀။ ကိုကို့အဖို့တော့ ခွဲစိတ်ခန်း၌ သေမင်းနှင့် အပြိုင် နပမ်းလုံးသော ဘသ။ ( သို့သော် ထိုဘ၀ ကို ကျေနပ်ပါသည် ) ပြန်လည် ယူရဦးမည်။
‘မြန်မြန်ပြန်ရင်လည်း ပြန်ပါစို့ ကိုကိုရယ်’ ဟု မြနန္ဒာက ပြော၏။
‘အစကတော့ ဒီမှာ နန္ဒာ့ အိမ်ကို တွေ့ပြီဆို။ တသက်လုံးနေချင်ပါပြီဆို။ ပီယာနိုတီးပြီး၊ စာအုပ်ဖတ်ပြီး၊ ပြဇာတ်သွားပြီး နေမှာပေါ့ဆို။ ဒါတွေရှိရင် နန္ဒာမှာ လုံလောက်တာပါပဲ။ ကိုကိုကတော့ နန္ဒာရဲ့  ထမင်းစားလက်မှတ်ပါပဲ။ မြောက်ကျွန်းသူမြခနောက်ပါပဲ’ ဟု အနည်းငယ် ၀မ်းနည်းသလိုလိုဖြင့် ပြောမိ၏။
‘ကိုကို ဧည့်ခန်းမှာ နန္ဒာကလည်း ဧည့်သည်ကြည့်စရာ ချိတ်ထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်ရုပ်ကလေးပဲ မဟုတ်လား’ ဟု ကိုကို့  နှမက ရန်ဖြစ်ဖို့ အသင့်ပြင်သည်။
သို့သော် ကိုကိုသည် ရန်မဖြစ်အားသေးချေ။ သူ့မှာ ငွေလိုနေသည်။ အန်းနာ ကလေးမွေးပြီးမှ ပြန်ချင်သည်။ ပွဲတော်မှာ အန်းနာနှင့် သုံးပစ်မိသောကြောင့် ငွေပြတ်သွားပြီ။ ဘဏ်ကငွေချေးနေရသည်။ ပါပါ့ထံမှ ငွေလာဖို့ တပတ်လိုသေး၏။ လောလောဆယ် အန်းနာကို သီးသန့်ဆေးရုံတခုမှာ နာမည်လိမ်ဖြင့် တင်ရဦးမည်။ ( သို့ပေမည့် သူ့ကလေးကိုတော့ ဖအေ့ နာမည် အမှန်ပေးခဲ့မည်ဖြစ်၏။ သာဦးဂျော်ပင် တွင်စေမည်ဖြစ်၏ )
ကိုကို ငွေလိုသလား ဟု မြနန္ဒာက မေးဖော်ရသဖြင့် အားလည်းနာ ကျေးဇူးလည်း တင်ရသည်။ သို့သော် ဆိုးရွားသော ကိုကို့ နှမသည် လက်ထပ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် လက်စွပ်ကို ချွတ်၍ ပေးလေသည်။ နန္ဒာနဲ့ တော်လည်းမတော်ဘူး ဟု ပြောရက်တတ်၏။ တကယ်တော့ ကိုကို ငွေစု၍ အစားလျှော့၍ အမေရိကမှ ၀ယ်လာသော စိန်ခြယ် မြလက်စွပ်ဖြစ်သည်။ နန္ဒာရဲ့  မျက်လုံး အေးအေးညိုညို ဖြင့် လိုက်မယ့်အရောင်ပဲလို့ သူ တွေးတော တ, သ ပြီး ၀ယ်လာသော လက်စွပ် ဖြစ်သည်။ ကိုကို အဖိုးထားလှသော လက်စွပ်ဖြစ်သည်။ ရွဲ့စောင်းရက်သော မြနန္ဒာပင်။
‘ပြန်ဝတ်ထားပါ’ ဟုသာ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောမိပြီး အိမ်မှ ထွက်လာကာ မိတ်ဆွေ ဂျူးဆရာဝန်ထံမှ ငွေချေးရသည်။
မြန်မာပြည်သို့ အန်းနာ ကလေးမွေးပြီးမှ ပြန်မည်လို့ သူ တင်းတင်းမာမာပင် ကြေငြာလိုက်၏။ ကိုယ့်ဘက်က တွေးတယ်ဆိုဆို၊ သည်လောက်တော့ မြနန္ဒာ သိတတ်ဘို့ကောင်းသည် ထင်၏။ တကယ်တော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့ဖို့ မမျှော်လင့်နိုင်သည့် အန်းနာနှင့် ကိုကို့ ကလေးကို သည်တခဏမှာတော့ ကြင်နာနိုင်သမျှ ကြင်နာရမည်ပင်။
အန်းနာ ဆေးရုံတက်သည့် တချိန်လုံး သူသည် အိမ်၌ ငြိမ်ငြိမ် မနေနိုင်ခဲ့။ အန်းနာရှိရာ ဆေးရုံးသို့ ပြေးလိုက်၊ ကိုယ့်ဆေးရုံက လိုရာစာအုပ်၊ စာရွက်စာတမ်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို သယ်လိုက်၊ မြို့ထဲထွက်၍ မြန်မာပြည်တွင် သုံးရမည့် ခွဲစိတ်ကိရိယာများ ရှာလိုက်နှင့် တော်တော် အလုပ်များသည်။ မသိတတ်သော မြနန္ဒာက အလျင်စလို လေယာဉ်ပျံလက်မှတ်ကို ၀ယ်ပြီးလေပြီ။ အထုပ်အပိုး သိမ်းဆည်းပြီးလေပြီ။ အန်းနာသာ နောက်ကျပြီး မွေးလျှင် ကိုကို့ ကလေးရဲ့  မျက်နှာကိုပင် မြင်လိုက်ရတော့မည် မဟုတ်။ ခုတော့ အန်းနာက စောပြီး မွေးအောင် လေ့ကျင့်ခန်းကြမ်းကြမ်း လုပ်သည်တဲ့။ ၀မ်းနှုတ်ဆေး စားသည်တဲ့။ အန်းနာသည် မှန်းသောရက်မှာ ကိုကို့ ကလေးကို မွေးသည်။ ပြီးတော့ သွေးလွန်သည်မို့ သွေး လေးပုလင်းပင် သွင်းရသည်။
ကိုယ့်အကြောင်းသာ တွေးသော မြနန္ဒာက ရန်ကုန်မှာ သုံးဖို့ နိုင်လွန်လိုက်ကာ ခန်းဆီးများသာ ၀ယ်သည်။ ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ဓားများ၊ ပန်းကန်များ၊ ၀ိုင်ဖန်ခွက်များ ၀ယ်သည်။ သားဖို့တဲ့ ပန်းချီဆေးများ၊ စုတ်များ ၀ယ်သည်။ ဓာတ်ပြားများ ၀ယ်သည်။ ပီယာနိုကို သယ်ယူဖို့ စီစဉ်သည်။
‘ပြီးတော့ ကိုကို-နန္ဒာ တမျိုး နှုတ်ဆက်ချင်တယ်။ နန္ဒာတို့ ဂျာမဏီ ရောက်စတုန်းကလိုလေ။ ကိုကိုနဲ့ နန္ဒာနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ညနေစာ အပြင်မှာ စားမယ်။ သားကို အိမ်မှာ ကလေးအစောင့်နဲ့ ထားမယ်။ ၇ နာရီတိတိ ရောက်အောင်လာနော်။ ပြီးတော့ ပွဲကြည့်မယ်။ လက်မှတ်နှစ်စောင် ၀ယ်ပြီးပြီ။ ပြီးတော့ အဆင်သင့် ခဏ က ကြတာပေါ့’
ကိုကိုသည် စိတ်လေးလေးဖြင့် ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာ အန်းနာအကြောင်း စဉ်းစားနေသည်။ အန်းနာကို ငွေများလည်း မပေးခဲ့နိုင်။ သွေးသွန်ထားသဖြင့် နွမ်းနယ် ဖျော့တော့ တာကိုလည်း စိတ်မချ။ ထပ်သွန်တတ်တာလည်း သတိရ၏။
သတိရသည့်အတိုင်းပင် ပြန်ကြရမည့် နောက်ဆုံးညမှ အန်းနာ သွေးထပ်သွန်သည်။ သွေးပုလင်းများ လေးပုလင်းပြိုင် ခြေနှစ်ဘက် လက်နှစ်ဘက်မှ သွင်းရသည်။ သေမင်းနှင့်အပြိုင် တိုက်ခိုက်ရပြန်၏။
သို့သော် ကိုကို့ နှမကတော့ ဒီတညအတွက် ဘယ်တော့မှ သူ့ကို ခွင့်မလွတ်နိုင်တော့။
ထိုည အိမ်သို့ တနာရီကျော်မှ ပြန်ရောက်ရ၏။ နန္ဒာနှင့် အပြင်းအထန် ရန်ဖြစ်ကြ၏။ နန္ဒာကို ရိုက်နှက်ပစ်လိုက်မိ၏။
‘ငါဟာ အန်းနာဆီက ပြန်လာတာတင်မကဘူး။ သွေးသွန်နေတဲ့ လူနာတယောက်ဆီက ပြန်လာတာကွ။ ဟုတ်တယ်။ ငါ့ကြောင့် သွေးသွန်ရတဲ့ ဘ၀ရောက်ရတာဆိုတော့ကော ဘယ်ပြောချင်သေးလဲ’
‘နန္ဒာ့ ကိုရိုက်တယ်’ ဟုသာ မျက်လုံးတဘက်ကို လက်ဖြင့်ဖုံးပြီး နန္ဒာက ပြော၏။ မျက်စိကို ထိမိသွားလားမသိဘူး။ နန္ဒာကို ကိုကို လက်လွန်မိသည်။ ပါးစပ်ကတော့ ဆက်ပြောမိ၏။
‘မင်းဟာ…. မင်းဘ၀ တခုတည်း အကြောင်းပဲ စဉ်းစားတယ်။ ငါ့ဘ၀ကို စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ဘ၀ကို သာယာကွက်ကလေး တကွက်တောင် မပေးဘူး။ ငါ အမြဲ အပျော်ရှာနေတယ်လို့သာ မင်း ထင်တယ်’
ဗြုန်းကနဲ တခါတုန်းက ဗိုက်ကို သေနတ်ပစ်ခံရသော ဒဏ်ရာဖြင့် ရောက်လာသည့် လူနာတယောက်ကို သတိရ၏။ ထိုလူနာကို မြနန္ဒာလို စိတ်ကူးယဉ်တတ်မယ့် ချစ်သူ မိန်းကလေးက သေနတ်ဖြင့် ပစ်သည်။ သစ္စာမဲ့လို့တဲ့။ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သည်။ ထိုလူနာကို ကမန်းကတန်း ခွဲစိတ်ရ၏။
ဗိုက်ထဲ ကြေမွနေသည်ကို ရှာဖွေ ချုပ်လုပ်ရ၏။ အဲသည်တုန်းက သေသေချာချာ ကြည့်တာပဲ။ ရှာတာပဲ။ ကျောက်ကပ်မှာ ဘာဒဏ်ရာမှ မတွေ့ပါဘူး။ ချုပ်လုပ်ပြီး ဗိုက်ခွဲတာ ပြန်ပိတ်ပြီးတော့လည်း လူနာက ကောင်းနေတာပဲ။ သွေးတိုးနှုန်း သွေးချိန်မှန်နေတာပဲ။ သတိရလာပြီး စကားတွေပြောလို့ ကိုယ်က နိုင်ခဲ့ပြီ ထင်တာ၊ ကိုယ့်ဘက်ပါလာပြီ ထင်တာ။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့ကျတော့ သေရော။ အလောင်းခွဲကြည့်တော့ ကျောက်ကပ်က သွေးသွန်လို့ သေရတာကို သိရတယ်။ ကိုယ့် ကို ပေါ့လျော့မှုနဲ့ ဆရာကြီးတွေက ကြိမ်းတယ်။ ရှင်းလင်းထုချေစာကို ရေးရတယ်။ ရက်အကြာကြီး စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ ရှက်ရတယ်။ ဒါတွေ နန္ဒာ သိသလား’
‘ငါ ဘယ်အချိန်မှာ စိတ်ညစ်နေတယ်၊ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဆိုတာ မသိဘူး။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲက သွေးသံရဲရဲ နဲ့ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ထွက်လာတာ မင်း မမြင်ဖူးဘူး’
စိတ်ထဲကတော့ ပြောလိုက်၏။ ‘အဲသည်အချိန်မျိုးမှာ အန်းနာကသာ ငါ့ကို ယုယတယ်၊ ဂရုစိုက်တယ်၊ အလိုက်သိတယ်၊ ကြင်နာတယ်’
‘ မရည်ရွယ်ပေမယ့် လည်း ငါ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်စေ ငါ့အပြစ်မပါဘဲဖြစ်စေ ခွဲစိတ်ခန်းမှာ ငါ လူသတ်မိတဲ့အခါမျိုးကို မဖြတ်သင့်တာ ဖြတ်မိတဲ့အခါမျိုး’
ဘယ်ဆရာဝန်သည် မမှားဖူး၊ မသေဖူးပါသလဲ။ သို့သော် မှားဖူး သေဖူးတာမှန်လည်း စိတ်ဆောက်တည်ရာမရ တပတ်မျှ လေလွင့်ရမြဲ။
‘မင်း သိတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ငါ ဆောက်တည်ရာမရလို့ မင်းဆီ ပြန်လည်ညလး မထူးလို့ နှင်းတောထဲ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်နေတဲ့အခါမှာ ငါ အလေလိုက်နေတယ်လို့သာ မင်းထင်တတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲလို့ တခွန်းမေးဖူးသလား’
မြနန္ဒာသည် အံ့အားသင့်ကာ ‘ကိုကို ဘာဖြစ်လို့ မပြောသလဲ’ ဟု ဖြည်းညင်းစွာ ပြော၏။ ပြီးတော့ နာသွားရှာမည့် မျက်လုံးတဘက်ကို အုပ်ထားသည့် လက် ဖြန့်ကြည့်ပြန်ကာ…..
‘ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှတော့ လူလူချင်း မရိုက်သင့်ပါဘူး’ ဟု ခပ်အေးအေး ပြောပြန်သည်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လျှင် အသစ်တဖန် ပြန်စတင်မည်လို့ ကိုကို မျှော်မှန်းထား၏။ သို့သော် ရန်ကုန်ရောက်၍ ၄-၅ရက်ကြာသည်အထိ နန္ဒာ့မျက်လုံးထဲက သွေးချေအုခြင်း မပျောက်ပေ။
ပြီးတော့ နန္ဒာသည် သူ့စိတ်တံခါးကို ကိုကို မ၀င်နိုင်အောင် ပိတ်ထားသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ပါပါ မာမာတို့ ၀ယ်ပေးသော ခြံမြေ၌ ပါပါ မာမာတို့ ပေးသောငွေဖြင့် အိမ်ဆောက်သည့်ကိစ္စကို မအားလပ်အောင် လုပ်လေ၏။ ကိုကိုကလည်း ၀င်ငွေကောင်းလာပြီး ငွေကို ရေလို သုံးနေတတ်သော မြနန္ဒာအား ချက်လက်မှတ်စာအုပ် အပ်ရ၏။
‘ဒီလို မအားဘဲနေရတာ တော်တော်ကောင်းသားပဲ’ ပြောကာ နှင်းဆီပင်များ စိုက်၏။ သစ်ခွပင်များ စိုက်၏။ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းကို ဂျပန်မြက်များဖြင့် ကော်ဇောလို ညီအောင် အကြိမ်ကြိမ်ညှိ၍ စိုက်၏။
မြက်ခင်းအလယ်တွင် ဂျာမနီက ဘယ်တုန်းက ရှာဖွေဝယ်လာမှန်းမသိ။ ၀ယ်လာသည့် ရေမြင်းရုပ်ကလေးဖြင့် ကျောက်ရေကန်သေးသေးလေး တည်၏။ ခြံထောင်၌ ကျောက်ဥယျာဉ် ပို ပြင်ဆင်သည်။
ပြီးတော့ ကိုကို့ ဧည့်သည်များကို ဖိတ်ကြားဧည့်ခံသည်။
ကျန်သော အချိန်မှာတော့ ရှန်ပိန်မသောက်တော့ဘဲ စီးကရက် တစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ် ဖွာကာနေသည်။ မြနန္ဒာ၏ လက်ညှိုး လက်ခလယ်များ ၀ါညိုနေသည်။
သို့သော် ကိုကို့ကို အမှတ်မထား သူနေသည်။ ကိုကိုအိမ်ပြင်၌ ဘာလုပ်သည် သူမသိ။ ကိုကိုရဲ့ ဆေးရုံတာဝန်စာရင်းကို မြနန္ဒာ ဘယ်တော့မှ ကြည့်သည်မဟုတ်။ ဖတ်သည်မဟုတ်။ မှတ်သားသည်မဟုတ်။ ကိုကို သည်ညအဖို့ အိမ်မှာ ရှိမယ် မရှိမယ်ကို သူမသိချင်းဘူးဟု ပြောင်ပြောင်ပြောသည်။ ကိုကို့သဘောကျနေပါလို့ ခပ်အေးအေးပင် ခွင့်လွှတ်သည်။ ပြီးတော့ ဗော့စ်ဝက်ဂွန်ကားဖြင့် လည်ပတ်ကာနေသည်။ ဆရာဝန် ကတော်အချင်းချင်းအိမ်သို့ ဖဲလည်ရိုက်သည်တဲ့။
အိမ်မှာ နေပြန်လျှင် ဂီတခန်းလို့ သူ့ဘာသာ နာမည်ပေးထားသော ဧည့်ခန်းနှင့် ကပ်လျက် အခန်း၌ သန်းခေါင်သန်းလွဲ ပီယာနိုတီးကာ နေပြန်သည်။ အိပ်ခန်းသို့ တက်မလာဘဲ ဂီတခန်းက လဲလျောင်းစရာ ခုံရှည်၌ အိပ်ချင်အိပ်တတ်ပြန်သည်။ အတူနေထိုင်သော်လည်း တစ်ခါမှာ ကိုကိုနှင့် ရောဝင်ရင်းနှီး စကားမပြောတော့။ သူကလည်း ခပ်ချွဲချွဲ ကလေးသဖွယ် ပြောတတ်တာကို မကြားရတာကြာပြီ။ ယခုတလော နိုင်ငံခြားသူများနှင့်တွဲကာ ငပလီသို့၊ မြစ်ကြီးနားသို့၊ ရှမ်းပြည်သို့ ပုဂံသို့၊ ထားဝယ်သို့ လည်ကာ နေပြန်သည်။
ကိုကိုက ရန်ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်လို့ မရ။
‘လင်မယားဆိုတာ ရန်ဖြစ်ရမှာပဲ ဒါလင်ရဲ့’ ဟု သူ အစချီဖူး၏။
‘လူသူစိမ်းနှစ်ယောက် အတူနေတာ တိုက်မိခိုက်မိမှာပဲ။ ရန်ဖြစ်နည်း ကိုကိုဖတ်ဖူးတာတစ်ခု ပြောပြမယ်။
‘နန္ဒာ ရန်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး’ လို့ ဆိုဦးမည်။
‘ကိုကိုက ဖြစ်ချင်တယ်။ လင်မယားဆိုတာ ရန်ဖြစ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် နာကြည်းအောင် မပြောရဘူး။ မတရား အနိုင်မယူချင်ရဘူး။ နှုတ်ပိတ် လက်ပိုက်ပြီး မာနနဲ့ မနေရဘူး။ ရန်ပွဲက ထွက်ပြေးပြီးလည်း အခန်းတံခါးပိတ်မနေရဘူး’
‘နန္ဒာက ကားသွားမောင်း နေတာပါ။ တစ်နာရီ မိုင်ခြောက်ဆယ်တည်းပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တော့ ဒီလမ်းမှာပါပဲ မြန်မြန်သွားသွား နှေးနှေး သွားသွား’
‘နန္ဒာဟာ ဘာဖြစ်လို့ ကိုကို့အတွက် စိတ်တံခါး ပိတ်ထားရတာလဲ’ ဟု ဖွင့်ဟ၍ အတင်းမေးလျှင်တော့--
‘နန္ဒာ မောသေးတယ်ကိုကိုရယ် ထ, မဖွင့်ချင်သေးဘူး’ ဆိုပြီး မျက်တောင်များဖြင့် သူ့မျက်လုံးကို ဖုံးအုပ်ပစ်ဦးမည်။ကိုကိုက ပခုံးကို လှမ်းဖက်လျှင်တော့ တောင့်တင်းပြီး သူအလိုမရှိလျှင် ဆိုမြဲ၊ ရက်စက်သော စကားကို ဆိုဦးမည်။
“ ကိုကိုဟာ မိန်းမလိုက်စားသူသာ ဖြစ်ပါတယ်နော်” ။ “မုဒိမ်းကောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်”
မာနကို သည်လို မကြာခဏ ထိခိုက်ပြန်တော့ ကိုကိုသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ငယ်ငယ်က တွဲဖူးသည့်၊ ယခု အစိမ်းဝတ်သူနာပြု ဖြစ်နေသည့် အီမလ်ဒါကို ရုံးမှာ လက်ထပ်ယူသည်အထိ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လိုက်မိ၏။ အီမလ်ဒါကို အိမ်ခန်းငှားပေးထားပြီး ကားပေါ်တင်ကာ လည်ပတ်နေလိုက်သည်။
အဲသည်နှစ်မှာ မြနန္ဒာ သည် မေမြို့၌ အိမ်နှင့်ခြံ ၀ယ်ပြန်သည်။ မာမာတို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သိမ်းဆည်းခဲ့သော အဖိုးတန် ပတ္တမြားလက်စွပ်ကို ရောင်း၍ ၀ယ်သည်တဲ့။ မာမာကပင် ဆူပူစိတ်ဆိုးကြ၏။ နန္ဒာကတော့ အိမ်ပြုပြင်မည်ဆိုပြီး ရှမ်းပြည်တက်သွားသည်မှာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာလေသည်။ သူ့သားကိုပါ ခေါ်သွားပြီး မေမြို့ကျောင်း၌ ထားသည်။
နှစ်လတစ်ခါလောက် စာရေးလိုက်၏။ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး ရေးတတ်ပြန်၏။ စိတ်ကူးယဉ်ဆဲပဲ ရှိသေး၏။
တစ်ခါတုန်းက ကိုကို ပြောဖူးသလိုပဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားတယ်မထင်ပေမယ့် အားလုံးဟာ နန္ဒာ့ အပြစ်ပဲလို့ ထားလိုက်ပါ။ လောလောဆယ်တော့ နန္ဒာ စိတ်အေးချမ်း လှပါတယ်။ ရာသီကလည်း သာယာတယ်။ နွေဦးပေါက်မို့ နွေးလာပေမယ့် နေရောင်ထဲ လမ်းလျှောက်ရင်တောင် ဆွယ်တာဝတ်ထားရတုန်းပဲ။
ဂျာမနီမှာ နေခဲ့ကြတာတွေ သတိရတယ်။ အဲဒီမှာ နန္ဒာနဲ့ သားနေခဲ့ရင်ကောင်းမှာ။ အန်းနာနဲ့ ကိုကို့ကလေး လေးလည်း ဆင်းရဲနေကြသလား၊ ကောင်းစားနေကြသလား တွေးမိတယ်။ သူတို့ဆီက စာမရဘူးလား။ နန္ဒာနဲ့ တစ်လှေတည်းစီးတွေမို့ ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းရတယ် ကိုကိုရဲ့။
နန္ဒာလည်း ပီယာနိုတစ်လုံး ထပ်ဝယ်ပြီး ဒီမှာထားရင် ကောင်းမလား၊ ငယ်ငယ်ကတီးတဲ့ ပီယာနိုအဟောင်းပဲ ဒီရွှေ့ထားရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားတယ်။ ကိုကို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင်တော့ အသစ်ဝယ်မှာပေါ့။ မတတ်နိုင်သေးရင်တော့ ပီယာနိုအဟောင်းပဲ ပြန်ပြင်ရမှာပဲ။ လက်ဝတ်လက်စား ထပ်ရောင်းရင် ပါပါတို့ပါ နန္ဒာ့ကို ရိုက်မလားမသိဘူး။
ညက လသာတယ်။ ထင်းရှုးနံ့တွေကလည်း မွှေးလိုက်တာ။ ထင်းရှုးရွက်တွေ ကတော့ တလက်လက်နဲ့။ ဇာပန်းခက်တွေလိုလှလို့။
တစ်ခါလောက် ကိုကိုလည်း နန္ဒာ့နားလာပြီး ထင်းရှုးခက်တွေ လရောင်မှာ လှနေကြတာကို ကြည့်စေချင်တယ်။ ပီယာနိုခေါက်စေချင်တယ်။ ညက ကိုကို့ကို သိပ်သတိရတယ်။
ကိုကိုကလည်း နန္ဒာ့ကို သူနာပြု အ၀တ်အစားနဲ့ ဆင်ကြည့်ဖူးမှာနော်။ ဒါပေမယ့် နန္ဒာက သွေးမြင်ရင် မူးချင်တယ် ကိုကိုရဲ့။ ဆေးရုံကြီးရှေ့က ဖြတ်သွားတဲ့အခါ ရတဲ့အနံ့တောင် သိပ်သည်းခံရတယ်။
အော်--- ကိုကို မယားအသစ်နဲ့ ဟန်းနီးမွန်းထွက်တုန်း ဒီစာဖတ်ရရင် နှောင့်ယှက်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ နန္ဒာ ရန်မထောင်ပါဘူး။ တကယ်သဘောရိုးနဲ့ တောင်းပန်တာပါ။
သားကတော့ အဖေ့ကို လွမ်းသားပဲ။ နန္ဒာ နေ့တိုင်း ကျောင်းလိုက်ပို့ လိုက်ကြိုတယ်။ သူက အခု ခြေထောက် မီပြီမို့ ကားမောင်းသင်ချင်တယ်တဲ့။ သင်ပေးရမလား။
ဒီမှာ အိမ်လည်းပြင်၊ ခြံလည်းပြင်နေလို့ တော်တော်နဲ့တော့ ပြန်မလာနိုင်သေးဘူးထင်တယ်။ သည်မှာ ပန်းစိုက်ရတာ သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းတာပဲ။ ဘာပန်းပင်ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းထ, ပွင့်တာပဲ။ ရေလည်းမလောင်းရဘူး။ မာလီကလည်း သိပ်အလုပ်နားလည်တာပဲ။
ကိုကိုပြောလို့ စီးကရက် လျှော့သောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှန်ပိန်သောက်နေတာထက် မသက်သာဘူးလား။
နေ့လယ်ဆိုရင်တော့ ရေကူးမိတာများတယ်။ ကိုကိုကော ရေကူးမသင်ချင်သေးဘူးလား။ ဘယ်တော့မှ ကိုကို ရေကူးတတ်မှာ မဟုတ်ဘးထင်ပါရဲ့။
ခုတလော ဟိုဘက်အိမ်က ဂီတဆရာတစ်ယောက်နဲ့ အသိဖြစ်နေတယ်။ သူက မန္တလေးသားပဲ။ ရှေးမြန်မာသီချင်းကြီးတွေ တတ်တယ်။ နန္ဒာတောင် တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ် စ,တက်နေပြီ။ သားပါသင်တယ်။ သားက ပတ္တလား လိုချင်တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ အရွက်ကောင်း အိမ်ကောင်း တစ်ခုမှာထားတယ်။ သားက ကိုကို့လို ဆရာဝန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နန္ဒာနဲ့ တူနေသလား မသိဘူး။ ဒီအတွက် နန္ဒာ့ကိုတော့ အပြစ် မတင်သင့်ပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်းတော့ ကိုကို့လို ဆရာဝန်ဖြစ်မယ့် သမီးလေးတစ်ယောက် မွေးသေးတာပေါ့။ တကယ်ပြောတာ။
စသည်ဖြင့် စာရှည်ကြီး ရေးလေ့ရှိသည်။
ဘယ်လောက် နှလုံးအေးစက်တဲ့ နန္ဒာပါလိမ့်။ ဘယ်လောက် ရက်စက်နိုင်ပါလိမ့်။ နန္ဒာဟာ ကိုကို့ကို မေတ္တာ သည်လောက် ခန်းခြောက်နေပြီလား။ သူစိမ်းပြင်ပြင်လို သဘောထားနိုင်ပြီလား။ ပြီးတော့ မန္တလေးက ဂီတဆရာနဲ့ သီချင်းတက်သတဲ့။ အနုပညာသည်ဆိုရင် ဘုရားလောင်းချည်း အောက်မေ့နေတာ။ မယား နန္ဒာအလှကို ဘယ်သူချမ်းသာပေးပါ့မလဲ။ လောကအကြောင်း မသိတတ်တဲ့ နန္ဒာ။ လူကိုယုံတတ်တဲ့ မြနန္ဒာ။
လင်မယားနှစ်ယောက် စာအပြန်အလှန်ရေးပြီး ရန်ဖြစ်ကြ၏။ ကိုကိုသည် ဘယ်တော့မှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စာရေးလိမ့် မရှိ။ ဖောင်တိန်ပင် ကိုင်လေ့မရှိ။ တိုက်ပရိုက်တာသာ ရိုက်လေ့ရှိသော်လည်း နန္ဒာက လက်နှိပ်စက်ဖြင့် ရေးသောစာကို ဖတ်မည်မဟုတ်ဆိုသဖြင့် ပီသအောင် လှအောင် ကြိုးစား၍ ရေးရပြန်သည်။
နန္ဒာ မသိဘူးလား၊ လောကမှာ ဘယ်ယောင်္ကျားမဆို မိန်းမအများကို တပ်မက်တာ၊ ပြစ်မှားတာ၊ မိန်းမဟူသမျှကို အချောင်ရရင် ကြံစည်မှာ။ အနည်းဆုံး နီးစပ်ရင် ဖြစ်တတ်တာ နန္ဒာ မသိဘူးလား။
ပြီးတော့ လူ့ဘ၀မှာ ဘယ်မှ မည်မည်ရရ အလုပ်ဆိုတာ လက်ညှိုး ထောက်ပြစရာ မရှိတဲ့လူမျိုးကို နန္ဒာ အထင်ကြီးတတ် ပေါင်းသင်းတတ်တာ အံ့သြလို့မဆုံးဘူး။ ကိုကိုဖြင့် တနေ့ တနေ့မှာ ၂၄ နာရီနဲ့ မလောက်လို့ အိပ်ချိန်လျှော့ပြီးရင် လျှော့နေရလို့ ပိန်တောင် ပိန်နေပြီ။ ခုတလော ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးတောင် ထိုးနေရတယ်။ အိပ်ရေးပျက်လွန်းတော့လည်း ခွဲတဲ့စိတ်တဲ့ အခါ လက် နည်းနည်း တုန်ချင်တယ်။
နန္ဒာက ရန်ဖြစ်ရမည်ဆိုလျှင် စာသွက်သွက် ပြန်ရေး၍ ပို့တတ်၏။
ကိုကို နန္ဒာ အနုပညာသည်ဖြစ်ဖို့ မွေးလာလျက်နဲ့ အညွှန့်ချိုးခံရလို့ လောင်းရိပ်မိနေလို့ မဖူးရ မပွင့်ရတဲ့ အနုပညာသည် မဖြစ်ရတဲ့သူလို့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို ထင်နေတာ။ လူတထောင်တသောင်းကို စာကုန်းကျက်ရင် ဆရာကောင်းနဲ့သင်ပေးရင် ဆရာဝန် အကုန်ဖြစ်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ အကုန်ဖြစ်တယ်။ ပန်းချီဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဂီတဆရာ ဖြစ်အောင် သင်ပေးလို့ မရဘူး။ စာကုန်းကျက်လို့မရဘူး။ သူ့ဘာသာ ပါရမီနဲ့ မွေးလာတာ။ အနုပညာသည်ဆိုတာကတော့ အနုပညာကလွဲရင် ကျန်တာဟူသမျှ မြေမှုန်မျှသာ ထင်တာ ကိုကိုရဲ့ ။ မာနကြီးတယ် ဆိုချင်ဆို။
ပြီးတော့ မိန်းမနဲ့အိပ်ရာထက် မွေ့လျော်ခြင်းဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းအဖို့ အရေးကြီးလှတဲ့ကိစ္စ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာ။ အနည်းဆုံး ကိုကို့လောက် အရေးကြီးချင်မှ ကြီးမှာ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် နန္ဒာ့ သား ပန်းချီဆရာဖြစ်မယ်ဆိုရင် နန္ဒာ ၀မ်းအသာဆုံးနေမှာ။ သားက ခု ၁၂ နှစ် ပြည့်တော့မယ်။ အ၀တ်အစားလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဘာမှလည်း စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ခဲတံတချောင်းနဲ့ လူပုံပဲ ဆွဲနေတာပဲ။ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ လျှောလိမ့်နေတဲ့ ရှမ်းမြေပြင်ကိုပဲ ဆွဲနေတာပဲ။ ဟိုနေ့က နန္ဒာ နှင်းဆီပန်းတွေ ပန်းအိုးထဲ ပြင်နေတာကို ဘယ်လောက် မြန်မြန် ကူးဆွဲခြစ်လိုက်တယ် မသိဘူး။ လက်ချောင်း လှုပ်ရှားတာ၊ နှင်းဆီရွက်ကလေးတွေ လှုပ်ခါသွားတာ အရအမိ ဖမ်းလိုက်တယ်။ သားကိုတော့ ဆရာဝန် မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ နော်။ သူ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ပေါစေ။ မဖြစ်ချင်တာ အတင်း မဖြစ်ခိုင်းပါနဲ့။ သားကို ချစ်ရင်……
အိပ်မက်ကမ္ဘာက မထွက်ချင်တဲ့ မြနန္ဒာဟာ တကယ်တော့ ချစ်စရာလည်းကောင်းရဲ့ ၊ သနားစရာလည်းကောင်းရဲ့ ၊ စိတ်ပျက်စရာလည်း ကောင်းရဲ့  ။
တနှစ်ကျော်မျှ မြနန္ဒာ ပြန်မလာသောအချိန်တွင်းမှာ ကိုကို ဘယ်လိုနေရသည်ဆိုတာတော့ သူ မစဉ်းစား။ အီမယ်လ်ဒါကို လက်ထပ်ယူလည်း မြနန္ဒာနဲ့ လို သားသမီး မပွားစီးစေဘူး ဆိုတာ ကိုကို့ နှမ နားလည်ပါစ။ ဘယ်မိန်းမနှင့်မှ သားသမီးဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရတာကို ကိုကို့ နှမ သိပါစ။ ဘယ်သူမှ ကိုကို့ မယားမဟုတ်ကြသည်ကို နန္ဒာ မသိဘူးလား။ ဘယ်မိန်းမမှ ကိုကို့ အပေါ် နန္ဒာလို မနိုင်နင်း မဖိစီးနိုင်ဘူး ဆိုတာ နန္ဒာ မသိဘူးလား။ နန္ဒာကို ကိုကို နှမြောသလို ဘယ်မိန်းမကိုမှ မနှမြောနိုင်ဘူး ဆိုတာ မသိဘူးလား။ တလုံးတည်းပြောရလျှင် ကိုကို့ နှမလို ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား။
ကိုကို ချစ်တတ်တာလည်း အဆန်းပဲ။ နန္ဒာကိုချစ်တုန်း ထွေရာလေးပါး စိတ်ကူးနိုင်သေးတယ်နော်။ ( သည်တခါပဲ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောလိုက်သည်ကို ကိုကို သတိထားမိ၏ )။ နန္ဒာတုိ့ ချစ်တယ်ဆိုတာကတော့ စိတ်ထဲက ဘာမှ မကူးမိအောင် မအားလပ်အောင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို တွေးနေတာ။ လန်ဒန်တုန်းက ကိုကို ဆေးရုံမှာ သွားလုပ်နေပေမယ့် နန္ဒာ စိတ်က လိုက်ပြီး ကိုကို့ ဆံပင်ကို နမ်းမိတယ်။ ကိုကို့ ပခုံးကို ဖက်မိတယ်။ ပီယာနိုတီးလည်း ကိုကို့ ကိုချစ်လို့ သတိရလို့ တီးတာ။
ခုလည်း လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ပန်းရောင်တိုက်ပန်းပွင့်နွယ်တွေပေါ် လိပ်ပြာဆင်တူလေးတသိုက် ရှုပ်ပွေလုံးထွေးပြီး အတောင်တွေ ခတ်နေတော့ မဆီမဆိုင် ကိုကို့ ကို ချစ်ခင်လာပြန်တယ်။ သတိရလာပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကို့ ကိုချစ်တာနဲ့ အမျှ စိတ်ဆင်းရဲရမှာ ကြောက်တော့ နောက်ဆုတ်နေလိုက်တယ်။ ချုပ်တည်းနေလိုက်တယ်။ အသေလို နေလိုက်တယ်။ သေပစ်လိုက်တယ်။ ကိုကိုကြောင့် နန္ဒာ ခဏခဏ သေရတယ်။ သားလေးအနားရောက်လာရင် ခဏ ပြန်ရှင်လာပြန်ရော။ သီချင်းတပုဒ်တက်ရင် ခဏ ပြန်ရှင်လာရော။
ဒါပေမယ့် အသစ်တကယ်ပြန်ပြီး မွေးဖွားလာဖို့ကတော့ အင်အားလိုတယ် ကိုကိုရဲ့ ။ ဒီအင်အားကို ကိုကိုကတော့ ဘယ်တော့မှ မပေးနိုင်တော့ပါဘူး ထင်ပါရဲ့ ။
ထိုနောက် နန္ဒာထံက စာ လုံးဝ မလာသည်မှာ အကြာကြီး ဖြစ်သည်။ ကိုကိုက စာနှစ်စောင် သုံးစောင် ထပ်ရေးလည်း မပြန်။ သံကြိုးရိုက်လည်း မပြန်။ ဒါနှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်ပြန်တော့ စကားကောင်းစွာ ပြောလို့မရ။ တယ်လီဖုန်းကလည်း ပြတ် ပြတ် သွားသည်။ တယောက်နှင့် တယောက် ‘ကိုကို’ ‘နန္ဒာ’ လို့သာ ခေါ်နေကြပြီး အချိန်စေ့တော့မည်ဖြစ်ရာ ‘နန္ဒာ၊ ဒါလင်…. ကိုကို့ ဆီ ပြန်လာပါ…. ပြန်လာခဲ့ပါတော့’ ဟုသာ နောက်ဆုံး ပြောလိုက်ရသည်။
သို့သော် နန္ဒာ ပြန်မလာချေ။
နန္ဒာ တကယ်ပင် ကိုကို့ ကို စွန့်ခွာတော့မည်လားဟု ပြင်းထန်စွာ ပူပင်ရ၏။ ဘယ်နည်းဖြင့်မျှ သူ နန္ဒာကို လက်လွတ်နိုင်မည်မဟုတ်။ နန္ဒာနှင့် ကွဲကွာရလျှင် သူ့ဘ၀၌ လုပ်စရာ ဘာမျှ ကျန်တော့မည်မဟုတ်။ နန္ဒာ စိတ်ထားပုံ ပြင်းထန်လှတယ်လို့ တဘက်က စိတ်ဆိုးပြန်၏။
ကိုကို့ ကို ချုပ်ချယ်လွန်းလှတယ်လို့ ထင်ပြန်၏။ နန္ဒာကို ဘာမှ နစ်နာစေသည် မဟုတ်ဘဲဖြင့် နစ်နာသည် ထင်ရက်ပါတကား ဟု တွေးပြန်၏။ နန္ဒာနှင့် ကိုကိုတို့၏ အိမ်ထောင်ကို ဘာမျှ မထိခိုက်နိုင်သော၊ နန္ဒာနှင့်စာလျှင် ဖွဲမျှသာဖြစ်သော မိန်းမအပေါင်းအတွက် ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာနိုင်လွန်းလှသည် ထင်ပြန်၏။
သို့သော် နန္ဒာကို ခဏဖြစ်စေ အလျှော့ပေးမှ ဖြစ်တော့မည် ထင်သည်။ နန္ဒာ ပြန်လာဖို့ သူ အရင်ဆုံး လုပ်ရမည်။
ထိုကြောင့် ခွင့်တလ တောင်းရသည်။ ခွင့်မပေးနိုင်ဟု ဆိုပြန်သည်မို့ စကားများရပြန်၏။ ဘယ်တုန်းကမှ ခွင့်မယူခဲ့ဘဲ သည်တလ အရေးကိစ္စအတွက် ခွင့်တောင်းသည်ကို မပေးသည့်အတွက် ဒေါသဖြစ်ရပြန်၏။ ယခုတလော သူ စိတ်တို ဒေါသ ကြီးသည်မှာ အမှန်။ သူ့ကို မနာလိုသော ပြိုင်ဘက် အလုပ်လုပ်ဘက်များကလည်း မမှန်သတင်း လွှင့်ကြသေးသည်။ နန္ဒာနှင့် ကွဲကြသလိုလို။ နန္ဒာပဲ နောက် လင်ယူတော့မလိုလို။
အီမယ်လ်ဒါနှင့် သူ ရန်ဖြစ်၏။ အီမယ်လ်ဒါက ပိုင်စိုးသည်ကို လုံးဝ သည်းခံလို့မရ။ မြနန္ဒာနှင့် ဘာတခု ယှဉ်လို့ရသည်မို့လဲ ဟု ရက်စက်စွာ တွေး၏။ အီမယ်လ်ဒါကိုတော့ ‘မင်းမကျေနပ်ရင် ကြိုက်သလိုလုပ်။ လက်ထပ်စာချုပ်ကို မီးရှို့လိုက်၊ လျော်ကြေးပေးရအုန်းမလား။ ပြော … ဘယ်လောက်လဲ’ စသည်ဖြင့် ပြောနိုင်၏။ စိတ်ထဲကလည်း ပါ၏။ သူတို့ကြောင့် ကိုကို့ နှမလေး စိတ်ဆင်းရဲရသည်လို့ တာဝန်ချလိုက်ချင်းသေး၏။ လက်ထပ်စာချုပ် ချုပ်ချင်လိုက်ရတာ။ ချုပ်တော့ကော ကိုကို့ ကို ပိုင်နိုင်သည်လား။ ကိုကို့ ကို ပိုင်ဆိုင်သူမှာ မြနန္ဒာတယောက်သာ ဖြစ်သည်။
ဒါတွေကို ဘယ်သူမှ သိသည်မဟုတ်။ နန္ဒာလည်း မသိ။ သိအောင်ပြောလို့လည်း မယုံကြည်။
အီမယ်လ်ဒါတော့ မပြောတတ်။ ကိုကိုကတော့ နဂိုကလည်း အဖိုးမထား။ အီမယ်လ်ဒါ နားပူလွန်း၍ လုပ်ရသည့် လက်ထပ်စာချုပ်ကို ပွ နေသော စားပွဲ အံဆွဲထဲက ထုတ်ကာ အပိုင်းပိုင်း ဆွဲဆုတ်၍ အမှိုက်တောင်းထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ပြီး ….
ပြီးတော့ သားထံ စာရေးရ၏။
သားနဲ့ မေမေကို ဖေဖေ အောက်မေ့လို့ လာခေါ်မလို့ ခွင့်တလ ယူလိုက်တယ်။ သားက ကျောင်းတ၀က်တပျက် ထွက်လာရမှာမို့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် အလဟဿ မဖြစ်ရအောင် ဖေဖေ ရန်ကုန်ကျောင်းမှာ မရ ရအောင် ပြန်သွင်းပေးပါ့မယ်။ ဒီနှစ် မရရင်တောင် သား စိတ်ပါတဲ့ ပန်းချီသင်တန်းဖြစ်ဖြစ် တက်နိုင်တာပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ် သားမေမေက ဒါမျိုး နားလည်တော့ သင့်တော်မယ့် ပန်းချီဆရာ တယောက်ဆီ မေမေ့ကို အပ်ခိုင်းတာပေါ့။
သား အခု ရေကူး သိပ်တတ်နေပြီဆို။ ကားလည်း မောင်းတတ်နေပြီ ဟုတ်လား။ ဖေဖေ သိပ်သဘောကျတာပေါ့။ သားက မကြာခင် လူကြီး ဖြစ်တော့မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ နက်တိုင်နဲ့ ကျကျနန ၀တ်စားတတ်ဖို့လည်း လိုတယ်သားရဲ့ ။ ပုဆိုးစိမ်းကလေး ၀တ်ပြီး ကျောင်းသွားတာ ဖေဖေ ကြည့်လို့မရဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးနဲ့ သိပ်တူတာပဲ။ ပြီးတော့ ဖေဖေ မနှစ်က အင်္ဂလန် ခဏသွားတုန်းက ၀ယ်လာတဲ့ သားရေဂျာကင်တို့၊ နိုင်လွန်ဂျာကင်တို့လည်း မ၀တ်ဘဲ ပစ်ထားတယ်ဆို။ သိပ်မိုက်တဲ့ သားပဲ။ ဘယ်လောက် အဖိုးတန်တဲ့ကောင်းတဲ့ အကျီတွေလဲ တော်ကြာ တိုကုန်တော့မယ်။
မင်းမေမေ ခုတလော အလုပ်များနေသလား။ ဘာတွေများ လုပ်နေသလဲ။ မြန်မာသီချင်းကြီး ဆိုတာကော တက်နေသေးသလား။ သားကော တက်နေသေးသလား။ သားကော လိုက်သေးသလား။ စာ ပြန်ရေးပါဦးကွ။
ဖေဖေ ဘယ်နေ့ ရန်ကုန်က ထွက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာတော့ စာ ထပ်ရေးလိုက်ဦးမယ်။ ခု ခွင့်ရတော့မယ်။ စာနဲ့ပေနဲ့ မကျလာသေးလို့ စောင့်နေရတာ။
မေမေ့ကို ဖေဖေက နှုတ်ဆက်လိုက်ကြောင်း ပြောပါ။
သြော် သား ပန်းချီဆရာ ဖြစ်ချင်တာ ဖေဖေ မကန့်ကွက်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘီအေ ဒီဂရီ ရအောင် အရင် စာကျက်ပါဦး။ ဘီအေ အောင်တော့ အင်္ဂလန် ပို့ပေးမယ်။ အဲဒီမှာ အနုပညာ မျိုးစုံ သင်ပေးတဲ့ ရွိုင်ရယ်ကောလိပ် ဆိုတာတွေရှိတယ်။ ပို့ပေးမယ်။
ဒါပေမယ့်ကွာ၊ ဆရာဝန်သားက ဆရာဝန် မဖြစ်တောင် အင်ဂျင်နီယာလောက်တော့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တာပဲ။
စသည်ဖြင့် သားကို ကိုယ်နှင့် တန်းတူထား၍ စာရေးလိုက်မိ၏။ သားထံက စာပြန်မလာဘဲ တယ်လီဖုန်း ဆက်သည်။ တုန်ရီသောလက်များဖြင့် ရင်တဒိတ်ဒိတ် ခုန်ကာ တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ရသည်။ နန္ဒာများလေလားလို့။ နန္ဒာပဲ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်း၏။ သားအသံကို ကြားတော့ ၀မ်းသာပြန်လည်း ၀မ်းနည်းရရဲ့ ။ သား ဖုန်းဆက်တော့ သူ့ အမေက ဘေးမှာ ရပ်နေမည်လား။ အပြုံးအေးအေးဖြင့် ငေးမောနားထောင်မည်လား။
‘ဖေဖေ့ စာကို ရတယ်။ မေမေ့ကိုတောင် ဖတ်ပြသေးတယ်’ ဟု သားက ပြောလေ၏။
‘ဟုတ်လား မေမေ နေကောင်းလား’
‘ ကောင်းပါတယ် ဖေဖေ ဘယ်တော့ လာမလဲ’
‘ တပတ်အတွင်းပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီစနေနေ့ကို နားလည်အောင်ပြောပြီး ထွက်ခဲ့မယ်။ ဖေဖေ့ လက်ထောက်က ကျေနပ်ရင် နှစ်ရက် ကြိုထွက်လို့ ရမှာပေါ့။ စနေနေ့ ခွဲရမယ့် လူနာတွေ လျှော့ပါ ပြောရမှာပေါ့။ ဖေဖေ့ တာဝန်တော့ ပျက်တာပေါ့’
သူတို့သားအမိ စကားပြောနေဟန် မပီမသ အသံများ ကြားလိုက်၏။ တစိုးတစိ ကြားရသော နန္ဒာ၏ အသံကလေးကို အငမ်းမရ နားစွင့်ရ၏။
‘ဟလို … သား မေမေနဲ့ ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ’
‘ မေမေက လေယာဉ်ပျံနဲ့ လာမှာလားလို့ မေးခိုင်းတယ်။ မေမေ လာကြိုမယ်တဲ့။ ကားမောင်းပြီး…..’
‘ ကျေးဇူးပဲလို့ ပြောလိုက်ပါ။ လေယာဉ်ပျံနဲ့ လာမှာပဲ၊ မင်းမေမေကို ခေါ်လိုက်ပါဦး၊ စကားပြောရအောင်’
အနည်းငယ် ၀မ်းနည်း၏။ သားဘေးမှာ ရပ်ပြီး လင်သည်ကို စကား တိုက်ရိုက်ပြောဖို့ သတိမရတာ။
‘ကိုကို နန္ဒာ ပြောနေတယ်’ ဟူသော ကိုကို တမ်းတခဲ့ပြီး ဖြစ်သော အမြဲကြားချင်တော့ အသံကို ခုမှ ကြားရလေ၏။
‘ ကျေးဇူးပဲ နန္ဒာရယ်၊ စကားပြောဖော်ရတယ။ ကိုကို စနေ့နေ့ လာဖြစ်အောင် လာခဲ့မယ်။ နန္ဒာ လာကြိုမယ်လား။ ကားမောင်းရတာ ပင်ပန်းနေမလား။ တောင်ကြီးမှာတော့ ကိုကို့ တပည့် ဆရာဝန်တယောက် ရှိတယ်။ သူ့ကို ကြိုခိုင်းလိုက်မယ်လေ’
‘ နန္ဒာ လာမှာပေါ့’
သည်လိုဆိုတော့လည်း နန္ဒာ လိမ္မာသားပဲ။ သိတတ်သားပဲ။ ကိုကိုသည် ကိတ်မုန့်များ သကြားလုံးများ ပြေးဝယ်ရပြန်၏။ နန္ဒာ၏ ဂျာမန်မိတ်ဆွေ တယောက် လာပို့ထားသော ဓာတ်ပြားထုပ် ယူသွားဖို့ သတိရပြန်၏။ တီးမည့်သူ မရှိသဖြင်ပ အသံလျော့ကုန်သော ပီယာနိုကို တလလုံး အချိန်ယူ၍ ပြင်စေဖို့ စီမံခဲ့ရပြန်၏။ နန္ဒာ ပြောသလို ကိုယ့်လင် ကိုယ့် မယား ကိုယ့် သားသမီးအပြင် ဘယ်သူမှ အ၀င်မခံတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ဟု တွေးလိုက်မိသေး၏။
မေမြို့ မှာ တလလောက် အနားယူစဉ် သူတို့ လင်မယားသည် တော်တော် သင့်မြတ်လျက်ရှိသည်။ သားကို အတူတူ ကျောင်းသွားပို့ကြ၏။ အတူ သွားကြိုကြ၏။ မိုးလင်းလျှင် မိုးရွာပုံမပေါ်လျှင် လက်တွဲ၍ လမ်းလျှောက်ကြ၏။ မြို့ ပြင် ကွင်းပြင်များကြားသို့ သွားကြ၏။ သစ်ရိပ် ရေစပ်ရောက်လျှင် နန္ဒာက နားချင်တတ်၏။ ‘ကိုကို ငှက်ကလေးတွေ အသံစုံပဲ အော်နေတာ ကြားလား။ နန္ဒာ မမြင်ဖူးတဲ့ ငှက်ကလေးတကကောင်ရှိတယ်။ ငုံး လို့ ပြောကြတယ်။ ဟုတ်လားမသိဘူး။ ကိုကိုသိလား’ စသည်ဖြင့် စကားများစွာ ပြောတတ်၏။
‘ ဒီမှာ လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ အေးအေးပဲ နေချင်ပါပြီ ဟု ညည်းတတ်၏။
ကိုကို အငြိမ်းစား ယူဖို့ကလည်း အဝေးကြီး လိုသေးတယ်နော်။ အလုပ်ကထွက်လိုက်ပါလား ကိုကိုရဲ့  ဟု ပြောလိုက်တော့ မသိတတ် နားမလည်လှပါကလားလို့ သနားရပြန်၏။
‘နန္ဒာကလည်း မာရီအင်တွိုင်းနက်လို ပြောနေပြန်ပြ’ီ လို့ စကား စ မိတော့….
‘ဘာလဲ ကိုကို’ လို့ နှမ နန္ဒာက ပထမ သတိမရ။
‘ ပြင်သစ်တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ဆူပူကြွေးကြော်ကြတော့ ဘုရင့် မိဖုရား မာရီအင်တွိုင်းနက်က မေးတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ ဆူကြတာလဲဆိုတော့ ပေါင်မုန့် စားစရာမရှိလို့ ငတ်လို့ပါဘုရားလို့ ဖြေတော့ အော် မိုက်လိုက်တဲ့လူတွေ ပေါင်မုန့်စားစရာမရှိရင် ကိတ်မုန့် စားပါလားတဲ့’
နန္ဒာက တချက်ရယ်ပြီး ‘အို တက်နိုင်တော့ တက်နိုင်သလို နေတာပေါ့။ ပြီးတော့ နန္ဒာ တကယ် စုံမက်တာ မများလှပါဘူး ကိုကိုရဲ့။ ရှိပြီးသား ပီယာနိုရယ်၊ ဓာတ်စက် ဓာတ်ပြားတွေရယ်၊ စာအုပ်ရယ်၊ သားဖို့ ပန်းချီပစ္စည်းရယ်၊ဒါပါပဲ။ ဒီလောက်တော့လည်း နန္ဒာ ကျောင်းဆရာမ လုပ်စားနေတောင် ရပါတယ်’
‘ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုကလည်း ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ သက်သက် အလုပ်လုပ်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ ကိုကို တသက်လုံး သင်ခဲ့ရတဲ့ ပညာကို အသုံးချနေတာဘဲ ဒါလင်ရဲ့ ။ ကိုကို့လက်တွေ ဓားမကိုင်ရဘဲ အချည်းအနှီး ဖြစ်နေမှာ စဉ်းစားလို့မရဘူး’
သည်တော့ နန္ဒာက ကိုကိုရဲ့  လက်ကို တောင်း၍ နီကြမ်းနေသော လက်ချောင်းများကို ကိုင်ကြည့်ပြီး မွေးညှင်း နုစိမ်းတဲ့ ပါးပြင်ကလေးများမှာ ကပ်သည်။ ပြီးတော့ ပိရိသေသပ်လွန်းလှတဲ့ အနည်းငယ် ပါးလွှာလွန်းသော နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ထိသည်။ မျက်တောင်များ ကော့ ဖြူးလာပြီး မျက်လုံးညို့ညို့ ၀င်းလက်လာသည်။
ခွဲစိတ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လက်ချောင်းများမို့ နန္ဒာ နမ်းချင်တာတော့ ဟုတ်မယ်မထင်။ ခွဲစိတ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်တာကို ခွင့်လွှတ်တဲ့ သဘောမျှသာ ဖြစ်သည် ထင်ရဲ့။
နန္ဒာသာ လှရုံဖြစ်၍၊ ပီယာနိုကို ဂုဏ်ရှိရုံတီးသည် ဖြစ်၍၊ ဆရာဝန်ကြီး သာဦးဂျော်၏ ပွဲလယ်မှာ တင့်တယ်သော မယားသာ ဖြစ်လျှင် အားလုံးသော ပြဿနာ ရှင်းသွားလိမ့်မည်။ မိန်းမ ၀ါသနာ ပါသော ဆရာဝန်ကြီး၏ ဂုဏ်ရှိစွာနေရလျှင် ကျေနပ်တတ်သော မိန်းမမျှသာ ဖြစ်လျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုကိုကပဲ နန္ဒာ့လို စာအုပ်ကဗျာ ဖတ်ကာ လက်ချောင်းများကို လူ့အသက်ဖြင့် မကစားဘဲ ပီယာနိုခုံ၌သာ ကစားတတ်လျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။
‘ဒါပေမယ့် ကိုကိုက ဘာကြောင့် နန္ဒာကို တစ်ယောက်တည်း အကြာကြီး ထားရသလဲ။ နန္ဒာ စာအုပ်တွေ အများကြီးဖတ်ဖို့ အချိန်ပေးခဲ့သလဲ။ ညညမှာ အထီးတည်း အိပ်မပျော်ဘဲ တွေးတောနေဖို့ ဖန်တီးခဲ့သလဲ။ ပါပါကတော့ နန္ဒာ့ကို ဘာကြောင့်စာတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့သလဲ။ ‘သည်လောက်တတ်ပြီ၊ ဒီနေရာမှာ ရပ်တော့’ လို့တားထားလို့ မရဘူး။ လူကိုသာ သော့ခတ်လို့ရမယ်။ စိတ်ကို တားဆီးလို့ မရနိုင်ကောင်းဘူး’ လို့ နန္ဒာ ပြန်ပြောလိမ့်မည်။
ကိုကိုသည် စကားနည်း ရန်စဲနေဖို့ တွေးတောလာ၏။ အနည်းဆုံး မေမြို့တွင် တစ်လနေကြသော အချိန်မှာ ပျော်ရွှင်နေကြဖို့သာ စိတ်ကူးသည်။
‘ကိုကိုကတော့ နန္ဒာ့ကိုချစ်တယ်၊ နန္ဒာနဲ့ အိမ်တောင်ဆောက်ပြီး နေကြတယ်။ သားသမီး ဖြစ်ရတယ်။ ပြီးတော့ နန္ဒာ့ကို ငွေအကုန်အပ်တယ်။ ပွဲထုတ်တဲ့မယားလည်းဖြစ်တယ်။ နန္ဒာရှိရာသာ ကိုကို့အိမ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုနေနေပြီဟာ။ ယောက်ျားမို့ လေလွင့်တယ်ပဲထားပါ။ ကိုကိုလုပ်တာတွေဟာ အရက်ထွက်သောက်သလို ဘာမှမပြောလောက်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ’ ဟု ရှင်းလင်းမိလျှင်တော့---
‘ပြောမှ ပြောရက်တယ် ကိုကိုရယ်။ ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ လင် အလုပ်သွားနေတဲ့ တစ်နေ့လုံး ညနေ ပြန်လာမှာကိုပဲ မျှော်နေတယ်။ လင် နေ့လယ်ပိုင်း အလုပ်မရှိလို့ လုံးတီး ကျန်နေရတယ်ဆိုတာ မသိဘူလား။ ကိုကိုမရှိတဲ့ ညများမှာ နန္ဒာ ပူလောင်ရတယ်။ မနာလိုစိတ်နဲ့ ရူးမတတ် ဖြစ်ရတယ်။ မာန ကျိုးပဲ့ရတယ်။ ကိုကိုကတော့ မဆီမဆိုင်လို့ ပြောဦးမှာပေါ့။ ဆီဆိုင်တယ် ကိုကိုရဲ့။ ကိုကိုလုပ်ပုံက နန္ဒာ့ကို မစုံမက်ရာ ရောက်တယ်။ အဖိုးမထားရာ ရောက်တယ်။ နန္ဒာ ဘယ်လောက်ရှက်ရတယ် ထင်လဲ။ ယောက်ျားပဲ ဆိုပြီး ကိုကို့အဖို့ အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စဟာ နန္ဒာ့အဖို့ မိန်းမမို့လားမသိ အရေးကြီးတယ်။’
‘လောကမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ ထင်ပါရဲ့။ ပြီးတော့နန္ဒာ စိတ်ထင်လို့လားတော့မသိဘူး။ နန္ဒာ့ကို မြင်ရင် မိန်းမတွေက သနားသလို ကြည့်ကြတယ်။ ရယ်ချင်သလို ကြည့်ကြတယ်။ စိတ်ထားညံ့သူတွေက ၀မ်းသာအားရ ရှိကြတယ်။ ယောက်ျားတွေက ရော အရိုအသေနည်းချင်တယ်။ နန္ဒာ့ကို အပြစ်ရှာလာကြတယ်။ လင်ပစ်မလို့ သဘောထားပြီး စ,ချင်ကြဦးမယ်။ နန္ဒာ စိတ်ကူးယဉ်တာလား။ ပြောပါဦးကိုကို’
‘နန္ဒာက ဒီလိုလူစားတွေနဲ့ တွေ့တဲ့နေရာ သွားချင်တာကိုး’
‘ဖဲလည်ရိုက်တာကိုးလို့ ပြောပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုကို။ ဒီလောက် ပီယာနိုတီး၊ ဓာတ်ပြားဖွင့်၊ စာဖတ်၊ အိမ်ကိုပြုပြင်လုပ်နေပေမယ့်လည်း စိတ်ဟာ အားကွက်ရသေးတယ်။ စိတ်ထဲက စကားမပြတ် ပြောနေသေးတယ်။ ရှန်ပိန်သောက်ပြီး ခပ်မူးမူး ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်တယ်။ ဖဲရိုက်ရတာ စိတ်တော်တော်ငြိမ်တယ်။ ကိုကိုတောင် ရိုက်ကြည့်ပါလား။’
‘သတ္တဗေဒသဘောအရ အဖိုဆိုသည်မှာ အမများစွာကို မှီဝဲနိုင်သည့် သဘာဝသာ ဖြစ်သည်ဆိုတာကို သိပ္ပံပညာရှင်မို့ လားမသိ။ ကိုကိုက ယုံကြည်ကျင့်ကြံ နေပြီး သူတကာထက် အိပ်မက်မက်တတ်သော၊ အိပ်မက်ဖြင့် ငိုတတ်သော မြနန္ဒာ လက်မခံနိုင်သည်မှာတော့ သူတို့ဘ၀ကို မပြေလည်စေနိုင် သည့် ကိစ္စပဲဟု ကိုကိုထင်သည်။ ဘယ်သူ့အပြစ်ရယ်လို့ မရှာဖွေချင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားသည်ဟုပင် မထင်နိုင်လေတော့ ကိုကိုသည် နန္ဒာကသာ အလျှော့ပေးစေချင်သည်။
အမှန်မြင်စေချင်သည်။ တစ်နေ့သိမြင်လာရမည်ဟု မျှော်လင့်သည်။
ပြီးတော့ နန္ဒာကို ပစ်ထားမိတာလည်း များသည်ထင်သည်။ လက်ထပ်ခါစက အချိန်များကို မိန်းမဆိုတာတွေက သတိရနေတတ်ကြသည် ထင်သည်။ လက်ထပ်ခါစက ကိုကိုသည် နန္ဒာ့ကို လူကြည့်တောင် မခံနိုင်တာလည်း သတိရ၏။ သူတို့ကပွဲသွားလျှင် ခင်မင်သော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေနှင့်တောင် က, ဖို့ ခွင့်မပေးနိုင်။ ကိုကိုချည်းသာ နန္ဒာနှင့် ကချင်သည်။ သွက်လက်သော တီးလုံးဓာတ်ပြားများကို ဖွင့်ကာ အနည်းငယ် က,ကြသေး၏။ ‘ဟုတ်တယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် ကိုကိုနဲ့ ဒါလင်နဲ့ ညပိုင်းထွက်က, ကြဦးစို့’ ဟု အကြံရလျှင် ‘သိပ်မကချင်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ နန္ဒာက ကိုယ့်ကို ဘယ်သူလာထိတာမှ မကြိုက်တော့ဘူး။’ ဟုပြောတတ်သည်။သို့ပေမယ့် နန္ဒာသည် သားကို အကသင်ပေသည်။ သားနှင့်အမေ က, နေကြလျှင် ကိုကိုသည် ဝေဆိုင်းသော မျက်လုံးများဖြင့် ငေးမော၍ ကြည့်ကာ ‘မောင်နှမလိုပဲ။ သားကလည်း ထွားလာတယ်။ နန္ဒာကလည်း နုနယ်လိုက်တာ။ လောကမှာ စုံမက်ကြတဲ့ ပိုက်ဆံတို့၊ ဂုဏ်သရေတို့ ဆိုတာတွေအတွက် မပူပင်ရလို့လား။ သူနှစ်လိုတတ်တဲ့ ပန်းပွင့်၊ ကျေးငှက်၊ ကဗျာ၊ ဂီတတို့နဲ့ စိတ်နူးညံ့ရလို့ပဲလား’ တွေးမိ၏။ ကိုကိုကတော့ ဆံပင်များအသက်ဖြင့်မလိုက် ဖြူသည်မို့ နေ့စဉ် ဆေးဆိုးနေရသည်။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်များ၊ အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသရသည့် ဆရာဝန်များသည် သူများထက် ပို၍ အိုလွယ် ကျလွယ်သည်မှာ ထုံးစံဖြစ်လေသည်။
မေမြို့မှာ မြနန္ဒာနှင့် သားနှင့် အနားယူပြီး နန္ဒာ အလိုကျ တစ်ဘ၀နေလိုက်သည်မှာ ပျော်စရာ မှန်ပေမည့် ခွင့်ရသည့်လကုန်၍ ဆေးရုံရှိရာ၊ အလုပ်ခွင်ရှိရာ ပြန်ရမည်ဆိုတော့ ကိုကိုသည် လက်များတုန်ရီအောင်ဝမ်းသာသည် အားလပ် ပျင်းရိနေသော သူ့လက်ချောင်းများသည် အလုပ်လုပ်ချင်ခြင်းအားဖြင့် ယားလှပြီ။ သူ့ဘ၀မှာ နှာခေါင်းယဉ်၍ မွှေးသည်ဟုပင်ထင်သော၊ ဆေးရုံကစင်ကြယ်သော၊ ပိုးမွှားကင်းသော အနံ့တို့ကို မွှေးယောင်လာသည်။ ဘာမျှ စဉ်းစား တွေးတောနေချိန်မရအောင် တဒင်္ဂမှ နောက်တဒင်္ဂသို့ လျင်မြန်စွာကူးပြောင်း၍ အကြောင်းခြင်းတများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ခွဲစိတ်ခန်းသို့ သူပြန်ချင်ပြီ။ အီမလ်ဒါကို သူပစ်ပစ်ခါခါ လုပ်ခဲ့တာလည်း အားနာသည်။ ပြန်တောင်းပန်ရဦးမည်။ အတွယ်အငြိတော့ မခံနိုင်။ ဆရာ ဆရာဖြင့် သူ့ကို ခရာကြကုန်သော နာ့စ်မများ၊ ကျောင်းသူများရဲ့ အသံတို့ကို လည်း သတိရတာ အမှန်ပင်။
ရန်ကုန်မှာ သူတို့ ပျော်ရွှင်စွာ နေကြသေး၏။ နန္ဒာက ပီယာနိုတီး၊ ဓာတ်ပြားဖွင့်ပြီးနေမြဲနေသည်။ အိမ်ထွက်မလည်တော့ချေ။ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်စာ၊ စကားတွေ မေ့မည်စိုး၍ နိုင်ငံခြားသားများကို မကြာခဏ ဖိတ်ကြားကျွေးမွေးလေ့ရှိ၏။ ကိုကိုဆေးရုံက ပြန်လာလျှင် အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော အိမ်ရှင်မဖြင့် သာယာသော အိမ်၏ အသံဗလံကို ကြားရ၏။
ကိုကို့ဧည်သည်နှင့် မြနန္ဒာ၏ ဧည့်သည်များသည် ဖက်စပ်လို့မရ။ စကားစရှာမရအောင် ခြားနားကြပြန်သဖြင့် ကိုကို့ဧည်သည်သည် တစ်နေ့၊ နန္ဒာ့ ဧည်သည် တစ်နေ့ ဖိတ်ကြားရ၏။ နန္ဒာ့ ဧည်သည်များကြားမှာ ကိုကိုပျင်းရိကာ အိပ်ပျော်သလို၊ ကိုကို့ဧည့်သည်များကြားမှာ နန္ဒာ ငိုက်မျဉ်းကာ မသမ်းဝေမိအောင် အံကြိတ်လို့ နေရသည်။
ပြီးတော့ ‘ နန္ဒာ တစ်နေ့လုံး တစ်ခါမှ မအားလိုက်ဘူး’ လို့ ပြောတတ်ချေသေး၏။ ပီယာနိုတီးရတာ၊ စာအုပ်ဖတ်ရတာ၊ ဓာတ်ပြားဖွင့်ရတာကို နန္ဒာက အလုပ်လုပ်သလို ကြည်ကြည်ညိုညို လုပ်ပေသည်ကိုး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုကို့ အပြစ်ပဲထားပါ။ ကိုကိုက တံတားအောက်၌ ရေမျောစီးသွားသည်ကို ကြိုက်သည်။ ကိုကို့ကို ချစ်ချင်လှသော မိန်းမတို့ကလည်း ကုန်ခမ်းမသွားနိုင်။ ရုပ်ချော၊ ပညာကြီး၍ တန်ခိုးရှိသည့် ဆရာဝန်ကြီး သာဦးဂျော်၊ အနောက်နိုင်ငံသားတို့၏ မိန်းမကို အရေးပေး ချော့မြူတတ်သော အကျင့်ပါသည့် သာဦးဂျော်၊ မိန်းကလေးကို ရမည်ဆိုလျှင် ထမင်းစားဖိတ်တတ်၊ ကားစီးခေါ်တတ်သော သာဦးဂျော်အဖို့ လက်ဆောင်လိုချင်၍၊ ဂုဏ်ရှိသည်ထင်၍၊ တကယ်ချစ်မည်ထင်၍ အမျိုးစုံသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် ခေါ်လျှင် လိုက်လာသည့် မိန်းကလေးတို့ကို သိပ်ပြီး ရှာစရာလို။ ပေါများလှသည်။
လီလီနှင့် တွေ့ပုံကတော့ တစ်မျိုးပါပဲ။ တရုတ်ကပြား ကျောင်းဆရာမလေး လီလီ၏အမေမှာ ကိုကို၏လူနာဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်သာဦးဂျော်ကို တစ်အိမ်လုံး ကြည်ညို ရိုကျိုးလို့ မဆုံး။ လက်ဆောင် ပူဇော်လို့ မဆုံး။
နောက်ဆုံး လီလီနှင့် ကိုကိုတို့ ထုံးစံအတိုင်း ချစ်ကြသည့်အခါတောင် လီလီတို့ တအိမ်လုံး မငြုစူ။ သာဦးဂျော်ကို တရုတ်နာမည်ပင်ပေးကာ တရုတ်လို အိမ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်သတဲ့။ တရုတ်၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် သတင်း စာထဲ ထည့်ကြော်ငြာသတဲ့။
ကိုကိုသည် အိမ်မပြန်ဝံ့ပဲ တစ်လလောက် လီလီတို့အိမ်မှာ သောင်တင်နေသည်။ လီလီတို့ကလည်း တသက်လုံး တင်ထားမည်မှာ အမှန်။ ကျေနပ်မှာအမှန်။ သို့ပေမည့် မြနန္ဒာကိုသာ ချစ်ချင်သော ကိုကိုသည်၊ သည်တခါတော့ကိုယ့်ကိုယ်သာ အပြစ်မြင်မိသည် ဖြစ်သောကိုကိုသည် မြနန္ဒာနှင့် သားဆီကိုသာ ပြန်လိုသည်မို့ မျက်နှာအောက်ချခြင်းဖြင့် တစ်ညပြန်လာသည်။
ခါတိုင်းလိုပင် ပီယာနိုခုံ၌ ထိုင်၍ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ ဂီတသံကို တီးခေါက်လျက်ရှိသည့် မြနန္ဒာကိုတွေ့ရပြီး၊ နန္ဒာရဲ့ ပေါ်င်ပေါ် မျက်နှာဝှက်၍ ငိုကြွေးလိုက်ချင်၏။ ကိုကို့အားနည်းလှတဲ့ ဒီတချက်ကို နန္ဒာလက်ဖြင့်ပဲ ကုပေးပါဦးဟု ပြောချင်၏။
သို့ပေမည့် နန္ဒာသည် လှည့်မကြည့်ဘဲ မျက်လုံးညို့ညို့များကို ကော့ဖြူးသော မျက်တောင်များဖြင့်သာ ဖုံးကွယ်ပစ်ပီး ပီယာနို ဆက်လက်တီးနေသေး၏။ ပြီးတော့မှ တိုးတိတ်စွာပင် ‘ကိုကို ထမင်းစားပြီးပြီလား’ ဟုသာ မေးလေသည်။
ဒါကတော့ ကိုကို ဘာလုပ်လာသည်ဖြစ်စေ၊ နန္ဒာ၌ ပြောစရာ စကားတခွန်းမရှိပါလို့ ဆိုလိုမြဲ ဖြစ်သော အမူအရာ ဖြစ်၏။ ‘ကျေးဇူးပဲနန္ဒာ၊ ကိုကို စားပြီးပြီ’ လို့ ပြောလိုက်ပြီး၊ တကယ်တော့ သူညစာတွင် မက နေ့လယ်စာပါ စားခဲ့သည်မဟုတ်။ တစ်ညနေလုံး နန္ဒာ့ထံ ပြန်လာချင်သဖြင့် လီလီနှင့် စိတ်ဆိုးရ၏။ လီလီ့မိဘများကို ကြေရာကြေကြောင်း ပြောရ၏။ တရုတ် စိတ်ပေါာက်လှသော လီလီ့မောင်လေး ယောက်ဖကလေးက ဒေါနှင့်မောဖြင့်၊ မောင်းချဓားဖြင့် စားပွဲကို ပစ်နေ စိုက်နေသည်ကို မမြင်ဟန် ပြုနေခဲ့ရ၏။ တစ်နေ့မှာ အသေဆိုးဖြင့် သေမည်လားလို့ စိတ်တွင်းက ချဉ်ချဉ်ဖြင့် ရယ်မောပစ်လိုက်၏။
အိမ်ခန်းတွင်း၌ လိုက်လံ ရှာဖွေသော် နန္ဒာ့ စာအုပ်ဗီရိုထဲမှာ ရှန်ပိန်ပုလင်းကို တွေ့ပြန်သည်။ ‘နန္ဒာကော’ လို့ မေးတော့ ‘မသောက်ချင်ပါဘူး၊ ကျေးဇူး’ လို့ အေးအေး ဖြေပြန်သည်။ ရှန်ပိန်ကို သောက်ရင်း တစ်နေ့ခင်းလုံးလည်း ဆေးရုံ၌ မောလာသည်မို့၊ ခွဲစိတ်ရသော နေ့မို့ အိပ်ရာပေါ်၌ ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲ၍ အိပ်ပျော်သွား၏။
အိပ်မက် မမက်တတ်ပါပဲလျက် အိပ်မက်မက်၏။ ပီသလှသည်တော့ မဟုတ်။ နန္ဒာ့ကို ကိုယ်တိုင် ခွဲစိတ်ကုသရ၏။ နန္ဒာ၏ အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်များ အကုန်ထုတ်ပစ်လိုက်ရ၏။ သို့သော် နန္ဒာ၏ နှလုံးခုန်သံကို နန္ဒာ့ရင်ခွင်၌ နားတစ်ဘက်အပ်၍ သူနားထောင်နေပြီး ‘မသေပါဘူး၊ ကောင်းသွားမှာပ’ဲဟု ကြေညာနေသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင်လား၊ တကယ်ပဲ နန္ဒ္ဒာဆက်လက် တီးခေါက်နေသည်လားမသိ။ ကြေကွဲစရာ ဂီတသံသည်တော့ တစ်ခန်းလုံး ဝေနေသည်။
တစ်ရေးနိုးလာတော့ သူသည် အနည်းငယ် လန်ဆန်းနေပြီး၊ ဖျပ်ခနဲ ထရပ်ကာ ကြည့်လိုက်ရာ အိမ်ခန်း၌ မီးလင်းမြဲ လင်းနေပြီး၊ နန္ဒာသည် ပီယာနိုခလုတ်များပေါ်တွင် ခေါင်းချပြီး အိပ်ပျော်နေသည်။ အသာကလေးသွား၍ ပွေ့ယူ လျှင်တော့ ပီယာနိုက အသံကြောင်များ ထွက်လာဆဲ။ နန္ဒ္ဒာက ‘မထိနဲ့၊ နန္ဒာ့ကိုမထိနဲ့’ ဟု ငြင်းဆိုသံကြားရလေ၏။
‘ဒါလင် ညောင်းနေမှာစိုးလို့၊ လိမ့်ကျမှာ စိုးလို့ လာခေါ်တာ။ အိပ်ရာထဲမှာ လာအိပ်ပါ’ ဆိုပေမည့်မရ။
‘နန္ဒာ့ကို မထိပါနဲ့၊ ကိုကိုက သွားပါ၊သွားပါ’ လို့သာဆိုသည်။
နန္ဒာဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေမိ၏။ သည်မျှ နီးစပ်နေသည်ကိုပင် သည်းမခံနိုင်ဟန်ဖြင့် နန္ဒာ ထသွားပြီး နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာရှည်၌ ခွေအိပ်သည်။ သိုးမွေစောင်ဖြင့် ခြုံပေးလျှင်တော့ မငြင်းဆန်တော့ချေ။ထိုကြောင့်ရဲတင်းလာပြီး ပါးချင်းအပ်၍ ‘နန္ဒာ’ ဟု ခေါ်လျှင် ‘ကိုကို မုဒိမ်းကောင်လား’ ဟု ပြန်မေးလိမ့်မည်။ နန္ဒာကလည်း တစ်မျိုးရက်စက်တတ်သည်ပင်။
‘အားလုံး ကိုကို့ကြောင့်’ တဲ့။ ထားပါ။ ကိုကို့အပြစ်ပါလို့ ဆိုလျှင်တော့ နန္ဒာသည် မျက်လုံးများပြူးကျယ် လှန်ကြည့်ပြီး မောပန်းဟန်ဖြင့် မျက်လွှာပြန်သိမ်းကာ အိပ်ပျော်သလို ဆိတ်ငြိမ်နေသည်။ ကိုကိုသည် ဘာမျှ မလုပ်တတ်တော့ပဲ မနက်ကျမှ နန္ဒာဖဲရိုက် ပိုက်ဆံများပေးလိုက်မည် တောင်စဉ်ရေမရ တွေး၏။ ခုတလော နန္ဒာ ဖဲလည်ရိုက်နေပြန်ပြီဟု ကြားရ၏။
သားကို ကောလိပ်ပို့သည့်နှစ်မှာ သမီးလေးကို မြနန္ဒာ မွေးဖွားခဲ့၏။ လိုလိုချင်ချင်ပင် မွေးဖွားခဲ့၏။ သားကလေး ကြီးသွားသဖြင့် ဟာနေသော ရင်ခွင်မှာ ကလေးတစ်ယောက် ထည့်ထားချင်သည်ဟု နန္ဒာ ကဆိုသည်။ ဒါကိုပဲ ကိုကိုက မရွှင်မလန်း ရယ်မောလိုက်၏။ ပါပါ မာမာက သဘောမကျ။
‘တကယ်တော့ နန္ဒာက ဒါဇင်ဝက်လောက် လိုချင်တာ။ ခု အသက်ကြီးသွားလို့၊ မမွေးဝံ့တော့လို့။ သွေးတိုးလည်း နည်းနည်းဖြစ်ချင်ပြီ မာမာရဲ့။’ ဟု ပြောကာ ရယ်မောလိုက်ပြန်၏။
သို့သော် သမီးလေးမွေးပြီးသည်ကစ၍ လေးနှစ်ရှိပြီ။ နန္ဒာသည် သူအကြိုက်ဆောက်ခဲ့သော အိမ်၏ သူ့အကြိုက်ဖွဲ့ခဲ့သော အိမ်ခန်းမှ ထွက်ခွာသွားသည်။ ဘော်ဒါဆောင်၌ သွားနေသော သား၏အိမ်ခန်းနှင့်ကပ်လျက် စာကြည့်ခန်းသို့ ပြောင်းသွားသည်။ စာအုပ်များကို အောက်ထပ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်။ သမီးလေးကမူ ကိုကိုနှင့်နန္ဒာတို့ရဲ့ အရင်က အတူနေခဲ့သည့် အခန်းနှင့် ကပ်လျက် ကလေးခန်း၌ နေသည်မို့ မေမေ ဖေဖေကြားမှာ ကူးသန်းလျက် ရှိသည်။နန္ဒာနှင့် ကိုကိုသည် ယဉ်ကျေးသူများမို့ ပါပါ မာမာနှင့် သားသမီးများရှေ့မှာ ရန်ဖြစ်လေ့မရှိ။
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပြီး ဆယ့်နှစ်နှစ်မျှကာလပတ်လုံး မာမာနှင့် ပါပါတို့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း အိမ်မှာ ထမင်း လာစားမြဲ ကျင့်ဝတ်သည်ဘယ်တော့မျှ မပျက်။
ကိုကိုသည် ဘယ်မိန်းကလေး၏ အိမ်ခန်း၌ စံမြန်းနေလည်း တနင်္ဂနွေည၌တော့ အိမ်မှာအိမ်မြဲ။ (အရင်တလောက လီလီတို့အိမ်မှာ တစ်လမျှ သောင်တင်လို့ ကိုကို ထိုဝတ္တရား ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။) ပါပါနှင့်မာမာတို့သည် မြနန္ဒာကို ကိုကို့လက် အပြီးအပိုင် လွှဲပြီးသည့် နောက်၌ ဘာမျှ အိမ်တွင်းရေးမှာ စွက်ဖက်ကြသည်မဟုတ်။ နန္ဒာကို စကားတစ်ခွန်း တိုးတိုးမေးလေ့မရှိ။ ကိုကို့ကိုလည်း အပြစ်တင်လိုသော သဘောမပြ။
နန္ဒာကတော့ ထိုဝတ္တရားပျက်စပြုလာ၏။ တစ်နေ့လုံး ညနေစာ စားပွဲအတွက်တော့ စီမံ ပြင်ဆင်လေသည်။ ခြံထဲမှာ ရာသီမပြတ် ပွင့်သော နှင်းဆီပန်းရနံ့ဖြင့် ဧည့်ခန်းကို ကြိုင်လှိုင် စေသည်။ ရာသီအလိုက် သစ်ခွ၊ သဇင်၊ နှင်းပန်း၊ သစ္စာပန်း တို့ဖြင့် အလှဖြည့်ဦးမည်။ မြနန္ဒာသည် ဧည့်ခန်း ပန်းအိုး ကောင်းစွာ စိုက်နိုင်ဖို့ နောက်ခံသစ်ရွက်ကို တောဖြစ်အောင် စိုက်ခဲ့၏။ ပြီးတော့ ကြမ်းပြင်၊ ကော်ဇော၊ ခန်းဆီး၊ လိုက်ကာကို သ, သည်။ အိမ်ဖော် ဒါဇင်ဝက်ကမူ စနေနေ့ညကတည်းက ကြိုတင်၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီ။
တနင်္ဂနွေညနေ ဂနာရီမှာ ထမင်းပွဲ စပြီ။
‘ဒါပေမယ့် ပါပါလို့’ ‘မြနန္ဒာကခေါင်းကို ငဲ့၍ နွဲ့၍ နန္ဒာက တနင်္ဂနွေညဆို ၀အောင် မစားဘူး ဟင်းရည်နဲ့ ပေါင်မုန်ပဲ စားမှာ’
‘ကောင်းတာပေါ့ ဒါလင’် လို့ တစ်ပြိုင်တည်း ထောက်ခံကြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နန္ဒာသည် ထမင်းပွဲ၌ ပါဝင်သည်မဟုတ်။ အိမ်ခန်းတွင်းသို့ ဟင်းရည်နှင့် ပေါင်မုန့်သာ ပို့ခိုင်းပြီးစားသည်။ သစ်သီးစားချင် စားဦးမည်။ နို့သောက်သည့်အခါ သောက်သည်။ ပြီးတော့ ခပ်သုတ်သုတ် ၀တ်စားပြင်ဆင်၍ ၆နာရီ မထိုးမီ အိမ်မှ ထွက်သည်။ ကိုကို့ကို နှုတ်ဆက်တတ်သေး၏။
‘ကိုကို တနင်္ဂနွေညနေဆိုရင် နန္ဒာက ဖဲမရိုက်ရ မနေနိုင်ဘူး။ မစ္စစ် သန်းတင့်အိမ်မှာ လူစုထားပြီးပြီ။ နန္ဒာမလာရင် စောင့်နေကြမှာ။ ၉နာရီထိုးမှ ပြန်လာမှာ။ ကော်ဖီဝိုင်းကျမှ နန္ဒာဝင်မှာ’
‘ခုတလော သည်လိုချည်း နန္ဒာ လုပ်နေတာပဲ။ နန္ဒာ့ပါပါတို့ကို ကိုကို သိပ်အားနာတာပဲ။’
‘အားနာစရာ ဘာအကြောင်းရှိလို့လဲ ကိုကိုရဲ့။ သူစိမ်းမှ မဟုတ်တာ။ ဆွေမျိုးပဲ ဟု နန္ဒာက ရယ်ရွှန်းလိုက်သေး၏။ ဧည့်ခံမယ့်သူ ကိုကို တစ်ယောက်လုံး ရှိတာပဲ။ ကိုကိုနဲ့ သူတို့နဲ့က စကားပြောလို့ သိပ်မြိန်တာ မဟုတ်လား။ နန္ဒာနဲ့က ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာ ဘာမှလည်းမရှိ။ ပြီးတော့ တစ်သက်လုံး နန္ဒာ့ကွယ်ရာမှာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကျမဟုတ်လား။’
‘နန္ဒာ ငယ်တော့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့။ ဒီလိုပြောတုန်းပ’ဲ ဟု စိတ်ပျက်လျှင်
‘ဘယ်ငယ်မှာလဲ။ အသက်လေးဆယ်ပဲ ပြည့်ခဲ့ပြီ။ သူများတွေကတော့ သုံးဆယ်တောင် ပြည့်မယ်မထင်ဘူးတဲ့။ ဟား ---ဟား၊ လူ့ပြည် အကြာကြီးနေဦးမှာထင်ပါရဲ့။ လေးဆယ်ပြည့်တုန်းက ကိုကိုတောင် မသိလိုက်ဘူး မဟုတ်လား။ အဲဒီနေ့ညကတော့ ကိုကို ပြန်လာပါတယ်။’
‘နန္ဒာ့အကြောင်း ကိုကို့ကို ဘာအသိပေးလို့လဲ’
‘နန္ဒာ၏မျက်လုံးများ ခက်ထန်သွားပြီးမှ စိတ်ကို ဆုံးမလိုက်သည့်သဖွယ် ပြန်လည်အေးငြိမ်းသွားကာ အဲဒီနေ့က သားရော သမီးပါ ခေါ်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားသွားတယ်လေ။ နန္ဒာ ဖယောင်းတိုင်ရောင်စုံတွေ ကြိုက်တယ်လေ။ မမှတ်မိဘူးလား’
ဟုတ်သားပဲ။ ကိုကိုသည် နန္ဒာ့မွေးနေ့များကို နှင်းဆီမ၀ယ်ပေးခဲ့တာကြာပြီ။ ပြီးတော့ ယောက်ျားအများတို့ထုံးစံအတိုင်း မွေးနေ့ဆိုတာ တယ်ဂရုစိုက်တာ၊ သတိရတာမဟုတ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းလာပြီးသော မယားအတွက် ပိုပြီးမေ့တတ်သည်။
‘ရွှေတိဂုံဘုရားလည်း မရောက်တာကြာပြီ။ ဘုရားမရှိခိုးတာလည်း ဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိလို့ ကလေးတွေခေါ်ပြီး သွားတာ။ စနေဆိုတော့ ကိုကိုခွဲစိတ်နေ့ မဟုတ်လား။ ကိုကိုလည်း လိုက်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။’
ကိုကို့နှမက အားနာဟန်ဖြင့် တစ်ချက်ရယ်ပြီး---
‘ဖယောင်းတိုင်တွေဖြင့် မြနန္ဒာလို့ နာမည်ဖော်ပြီး ပူဇော်ခဲ့တယ်။ ဘုရားမရှိခိုးဘဲ ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဒီအတွက်တော့ မြတ်စွာဘုရားက ခွင့်လွှတ်မှာပါနော်။ မြနန္ဒာ လောင်မြိုက်ခြင်းဟာ ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့’
သည်လို ဖွဲ့နွဲ့ပြောပြန်တော့ ကိုကို့မှာ ပြောစရာမရှိ ဖြစ်ရသည်။ သို့သော် နန္ဒာကို သေသေချာချာ ကြည့်မိ၏။ ဆံပင်တစ်ချောင်း မဖြူသေး။ အသားအရေများ ပြည့်တင်းစိုပြေမြဲ။ ရေကူးသွားမြဲ။ ပွဲလမ်းရှိရာ အတူသွားကြလျှင် ဘေးမှာ ကိုကိုရှိလျက်ဖြင့် မြနန္ဒာကို ငယ်ရွယ်သော မောင်အရွယ်၊ တူအရွယ်များက စုံစုံမက်မက် ငေးမောကြသေး၏။
‘မှတ်ချက်တော့ အထွေအထူးမရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့။ ၄၀ ပြည့်ပေမယ့်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ထူးပြီးပြောစရာ ဘာမှမရှိတာ ကြာပြီပဲ။’
နန္ဒာ တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြန်ပြီဟု ကိုကို ထင်သည်။အခန်းပြောင်း အိပ်ကတည်းကပဲလား။ သားဘော်ဒါ ပို့ကတည်းကလား။ သမီးလေး စကားပြောစကလား။
သမီးနှင့် စကား ပြောနေကြပြန်တော့ နန္ဒာပြောင်းလဲသည်လို့ ထင်မှတ်နိုင်ဖွယ်မရှိ။
ဆရာဝန်လုပ်မယ်လို့ ကြွေးကြော်လေ့ရှိသော မြသီတာလေးကို ရွှင်ပြုးံနေသာ နန္ဒာက ကဗျာရွတ်ခိုင်းတတ်၏။
‘မင်းကုသရဲ့ နှမ ပဘာ
ပဘာ ကိုယ်ရောင်နဲ့ လင်းစတမ်း။
ပြီးတော့ မြသီတာက နန္ဒာပေးထားသော ပုလဲကုံးရှည်ကြီးကို ဆွဲကာ လက်ညှိုး၌ ချိတ်ကာ မေးထိုးလို့ က,တတ်သေးသည်။
‘ကဲဆိုပါဦး သမီးရယ်။ မေမေနားကြပ်ကလေး ၀ယ်ပေးမယ’် ဆိုတော့ ကိုကိုရင်ထဲထိတ် ပြီးမှ စိတ်အေးချမ်းရသည်။ နန္ဒာ မဆိုးလှပါဘူး ဟု တွေးထင်လာသည်။
သမီးမြသီတာသည် မအေလို ပီယာနို တီးချင်သော်လည်း ဖေဖေ့ နားကျပ်ဖြင့် ဆရာဝန်လုပ်တမ်း ကစားရတာကို ပိုကြိုက်၏။ အိမ်သားများရဲ့ နှလုံးခုန်သံကို လိုက်လံ နားထောင်တတ်၏။ ဂေါက် ခေါ် အဆစ်ရောင် ရောဂါဖြင့် မာမာ့ခြေမ ပူလောင် ယောင်ရမ်းနာကျင်သည်ကို ဖြတ်ပေးလိုလှသတဲ့။ သမီးလေး မြသီတာကြောင့် ကိုကို့မှာ တအားတက်ရသည်။ မြနန္ဒာကလည်း မြသီတာ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်စေရမည်ဟု ကတိပေးခဲ့၏။ သို့သော် အိမ်မှာ ကိုကိုကြားနေရသော ကဗျာတို့သည် ငယ်ငယ်က ခင်မင်ခဲ့ဖူးသော လင်းထင်၏ ကဗျာများဖြစ်သည်ကို သိရပြန်သည်။
‘ကြာပြီ ကိုကိုရဲ့။ မစ္စစ်သန်းတင်တို့အိမ်က ဖဲဝိုင်းကို သူလာလာနေတာ။ ကိုကို အင်မတန်ချီးမွမ်းတဲ့ ဒေါက်တာခင်အေးရီနဲ့ ရတယ်လေ။ တော်တော် သတ္တိကောင်းတဲ့မိန်းမ။ နန္ဒာလည်း ခင်ပါသေးတယ်။ မတွေ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ပေမယ့် စိမ်းမသွားပါဘူး’ ဟု အေးစက်စက် ပြောပြန်သည်။
ကိုကိုသည် ဘာမျှ မပြောဘဲနေဖို့ ကြိုးစားသော်လည်း မရ။
‘လူတွေက ဘာပြောမလဲ ဒါလင်ရယ်’ ဟု ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ပြောသည့်အခါ
‘မသိဘူးလေ’ ဟု ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဖြေလေ၏။
‘မစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါဘူး။ နန္ဒာ လူလာဖြစ်တာ ရှင်းလင်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတကာ ကျေနပ်စေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအရွယ်ရောက်လာမှတော့ နန္ဒာလည်း နားလည်လာပါပြီ။ နန္ဒာ့အတွက်လည်း နန္ဒာ အသက်ရှင်နေဦးမယ်။ ကိုကိုပြောသလိုပဲ နန္ဒာက တော်တော်ခေါင်းမာတာ။ ခဏခဏ သေပါရက်ဖြင့် အသစ်ပြန်ပြီး မွေးနေတာပဲ။ တစ်ဘ၀မှာ အသက်ကိုးခါ ပြန်ရှင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်သတ္တ၀ါထက် ဆိုးသေးတယ်။’
တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း ကိုကို့နှမကိုပဲ ကိုကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရသည်။ ထူးဆန်းသော စိတ်ကူးနှင့် ထူးဆန်းသော စကားကို ထပ်တလဲလဲဆိုတတ်သည်။ စိတ်မရှည်တဲ့အခါမျိုးမှာ ‘သေတယ်ဆိုတာ ကိုကိုသိသမျှတော့ ရင်ခွဲရုံက ကိစ္စပဲ ဒါလင်ရဲ့’ ဟုပြောလိုက်ချင်သည်။ နန္ဒာ နည်းနည်းမှ မသေပါဘူး။ အရှင်ကြီးရှိသေးတယ်။ ပြီးတော့ လင်းထင်ကို ယူကြည့်စမ်း။ ကိုကို့လက်ထဲမှာလို လ,ရောင်မှာ လွမ်းနေနိုင်မယ်ထင်လား။ ပီယာနိုတီးပြီး၊ ဓာတ်ပြားဖွင့်ပြီး၊ စိန်၊ ရွှေ၊ ပိုးဖဲ ၀တ်ပြီး ညစာစားပွဲ သွားနေနိုင်မယ် ထင်လား။ ဗောက်စ်ဝက်ဂွန်ကားဖြင့် အလကား လျှောက်မောင်းနေနိုင်မလား။ ပုဂံ၊ ငပလီ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပြည်၊ ထားဝယ် လည်ပြီး နေနိုင်မလား။ တကယ်တော့ လွမ်းရေးထက် ၀မ်းရေးခက်တာ အမှန်ပဲ။ ပြီးတော့ ဘယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာကော နန္ဒာကို ကိုကို့လို ချစ်နိုင်မှာလဲ။
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်လင်က ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ခုသာ စဉ်းစားနေဖို့ ကောင်းတာ။ အဲဒါကလွဲလို့ ဘာမှမတွေးဘဲ နေဖို့သင့်တာကို အမြဲတမ်းတွေးတော ငေးမောနေခြင်းဖြင့် ပြီးရပါတယ်ဆိုတဲ့ မြနန္ဒာဟာ သဘောမပေါက်မိဘူးလား။
ဒါမှမဟုတ် နန္ဒာ ဟာ ကိုကိုနဲ့ နန္ဒာတို့နှစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းဟာ ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ပြည်ဖုံးကား ချသွားပြီ ထင်ပါရဲ့။
ကိုကိုကတော့ ပြည်ဖုံးကားကို ပြန်တင်နေသေးတယ်။ နန္ဒာ့ မာမာတို့ ထမင်းလာစားတဲ့ တနင်္ဂနွေညများမှာမှ တမင်ထွက်ပြီး ဖဲရိုက်လည်း၊ ည ၉ နာရီမှ ပြန်လည်း ကိုကိုကတော့ ကော်ဖီဝိုင်းမှာ နန္ဒာ့ကို ထိုင်ပြီး ဧည့်ခံစေဦးမယ်။
ရက်စက်တယ်ဆိုဆို၊ မြသီတာလေး နိုင်လွန်ဇာ ည၀တ်အကျီင်္လေးဖားလျားဖြင့် အိမ်ပေါ်က ပြေးဆင်းလာတဲ့အခါ ၊ သမီးလေးဆံပင်ရှည်မှာ နန္ဒာ မျက်ရည်သုတ်တာ မြင်ရရင် ကိုကို ကျေနပ်တယ်။ နန္ဒာ့မှာ မျက်ရည် မခန်းတော့ဘူး။ နန္ဒာ နှလုံး အေးစက်သော်လည်း မခဲသေးဘူး။
နန္ဒာပြောတဲ့ ပန်းချီဆရာ ကိုတင်မောင်ဆိုတာလည်း အိမ်ဖိတ်နိုင်ပါတယ်။ သားကို အပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုကိုကတော့ နန္ဒာ့အနားကို ကပ်လာတဲ့ ယောက်ျားမှန်သမျှကို မယုံနိုင်ဘူး။ အကဲခတ်ရမှာပဲ။ ကြည့်နေရမှာပဲ။ အနုပညာသည် ဖြစ်တာနဲ့ပဲ ဘုရားအလောင်းလို မယုံကြည်နိုင်၊ မကြည်ညိုနိုင်ဘူး
နန္ဒာသည် ကိုတင်မောင်၏ ပန်းချီပြပွဲများကို သည်နှစ်တနှစ်လုံး လိုက်လံကြည့်ရှု နေခဲ့သည်။ အမေရိကန်မကြီး မစ္စစ်အက်ဗော့ရဲ့ အိမ်မှာ ကိုတင်မောင်ရဲ့ တစ်လက်ရာပြပွဲကို ကိုကိုပါ အတင်းခေါ် သဖြင့် လိုက်ရသေး၏။ မှောင်မိုက်သည့် တောအုပ်ဝက မီးတိုင်ကလေး ထွန်းညှိထားသော ကားချပ်ကို လိုချင်သည် ဟု ဆို၏။ သူများဝယ်သွားပြီမို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်ကို မကျေနပ်နိုင်ဘဲ တ, သနေသည်မို့ ကိုကိုပင် အံ့သြကာ ကိုယ့်နှမကိုယ် ငေးကြည့်နေမိသေး၏။
နန္ဒာသည် ပုဂံဆိုသော ကားချပ်ကို ၀ယ်လိုက်၏။ လှပသော ပန်းချီပဲဟု ကိုကို အကြမ်းဖျင်းပြောတတ်သည်။ ပန်းချီကား၌ အနုစိတ်လက်ရာများပါပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ကြည့်စရာ အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံပါသည်လို့ နန္ဒာက ပြော၏။
သူများနှင့်မတူသော အရောင်စပ်ဟန်တွေ့ရသည်လို့ နန္ဒာကပြော၏။ ဟုတ်သည်။ မရမ်းနုရောင်၊ စိမ်းပြာရောင်များ မမျှော်လင့်ဘဲ များစွာသုံးထားသည်ကို သတိထားမိ၏။
ပုဂံကို အိမ်မှာ မချိတ်ဘဲ သားကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်၏။ ပန်းချီဆရာ ဖြစ်ချင်သည်ဆိုသော နန္ဒာရဲ့သား။ သာဦးဂျော်ရဲ့သားလို့ ပြောရမှာတောင် ရှက်သည်။ သားက သွေးကိုမြင်လျှင် မူးချင်သည်တဲ့။ ဆေးရုံနံ့ကို သည်းမခံနိုင်တဲ့။ သားငါး ကြက်ဥ အစားနည်းပါးမကြိုက်သဖြင့် ပိန်ရှည်ကြီး ဖြစ်နေသော သားကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်၏။ ပြီးတော့ သားအမိနှစ်ယောက် ထိုပန်းချီကားကို ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်နေတတ်ကြပြန်သည်။
ပြပွဲမှာ နန္ဒာက သိလိုက်ပုံမရ။ ကိုကိုက ပန်းချီဆရာ ကိုတင်မောင်ကို မြင်ခဲ့သည်။ လူပျိုကြီးဖြစ်၍ အလွန် သန့်ရှင်းဖြူစင်စွာ နေခဲ့သည်လို့ မစ္စအက်ဗော့က ရယ်ဟဟဖြင့် ပြောပြသည်။ မိတ်ဆက်ပေးဦးမည်ဆိုတာကို ယဉ်ကျေးစွာ ရှောင်ခဲ့ရသည်။ ရိုးပုံတော့ရသားပဲ။ လူကောင်း သူကောင်းနှင့် တူပါတယ်ဟု သူထင်မြင်ခဲ့၏။
နန္ဒာကတော့ ပန်းချီကားကို နှစ်သက် ယုံကြည်တာဖြင့်ပဲ ပန်းချီဆရာကို ယုံကြည်ပြန်ပြီ။ လက်ဖက်ရည်သောက်ဖိတ်ကြားပြီး မိတ်ဖွဲ့ဦးမည်။ ဆန်းကြယ်သော ဘာသာစကားကို ပြောကြဦးမည်။
ကိုကိုကတော့ မဖက်စပ်မိသည်ဖြစ်လည်း နန္ဒာကို လက်မလွှတ်နိုင်ပါဘူး။ နန္ဒာကို အဖိုးတန်တုန်း၊ နှမြောတုန်းပဲ။ အသက်ဘယ်လိုရတာလည်း လောကအကြောင်း နားမလည်တဲ့၊ ကလေးလို တွေးတတ်တဲ့၊ တကယ်တော့ စုန်းပြူးသာ ဖြစ်တဲ့ မြနန္ဒာဟာ ကိုကိုရဲ့ နောက်ဆုံးအချစ်သာ ဖြစ်တယ်။
နန္ဒာ့လိုပဲ တစ်ခါလောက်တော့ နန္ဒာ့စကားမျိုး ပြောလိုက်ဦးမယ်။ နုနယ်ပျိုမျစ်ဆဲ၊ အလိုရှိဖို့ကောင်းဆဲ မြနန္ဒာဟာ အချိန်မလွန်ခင် ကိုကို့အတွက် အသစ်မွေးဖွားရဦးမယ်။ ဘယ်တော့မှ ထပ်မသေရတော့တဲ့ မွေးဖွားခြင်းမျိုးဖြင့် မွေးဖွားရဦးမယ်။ လောကအားလုံးကို ကတိပေးလိုက်တယ်။ နန္ဒာဟာ ကိုကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲ နှမမြနန္ဒာရေ့။ လို့ ကြုံးဝါးလိုက်ရင်တော့ နားလည်သ်ိမြင်လာရမယ့် လှလို့မဆုံး သေးတဲ့ နန္ဒာဟာ မျက်ခုံး၊ မျက်တောင်ကော့တွေပင် လှန်လို့ ကြည့်ပြီး၊ မျက်လုံးအေးအေး ရွှန်းလဲ့လာပြီး ဆံမြိတ်ပခုံးပေါ် ဝေဖြာကျအောင် ခေါင်းကိုလှည့်လို့ နွဲ့ပြီး ‘သူကလည်း’ လို့ ခပ်ချွဲချွဲ ပြောလိမ့်မယ်။
ဒီတော့မှ အိမ်တိုင် အိမ်ထုတ်တန်းတွေကို လက်သမားတတွေဖြင့် မိုးထိအောင် မြှင့်ရလိမ့်မယ်။ ကိုကိုရဲ့ သတို့သမီးကို မင်္ဂလာခန်းမထဲ မ၀င်ခင် ပွေ့ချီ မြှောက်ကစားဖို့ပေါ့နန္ဒာရဲ့။ ။
မှတ်ချက် - ဒုတိယအကြိမ် (ပန်းရွှေပြည်စာအုပ်တိုက် ) ၊ တတိယအကြိမ် (Comet Books) ၊ စတုတ္ထအကြိမ် (စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်) များမှ ပြန်လည်ပုံနှိုပ်ထုတ်ဝေရာတွင် စာပေစိစစ်ရေးကြောင့်ဖြတ်တောက်ခံရသည့် စာသားများကို မူရင်း ပထမအကြိမ်အတိုင်းပြန်လည်ရှာဖွေထည့်သွင်းထားပါသည် ။
[ကျေးဇူးစကား X မောင် ကိုကို နှင့် မြနန္ဒာ အတွက် အလုပ်များသည့်ကြားက အားထုတ်ပေးခဲ့ကြသော မစန္ဒာလှိုင် မြတ်သန္တာ ညို တို့အား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။]
Posted by Aung Phyoe at 17:164comments:
Labels: ရှုမဝမဂ္ဂဇင်း, ဝတ္ထုရှည်, မောင် ကိုကို နှင့် မြနန္ဒာ
မြနန္ဒာ ပြောချင်သေးသည်။ (မောင် ကိုကို နှင့် မြနန္ဒာ ၂)
မောင့်နှမ မြနန္ဒာ (မောင် ကိုကို နှင့် မြနန္ဒာ ၁)